July 2017 - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး ကာလဝမ်းရောဂါကူးစက်မှုဆီ ဦးတည်နေသည့် ယီမင်
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆိုးရွားဆုံးပြည်တွင်းစစ်နှင့် စစ်ဘေးဒဏ်ခံစားနေရ သည့်နိုင်ငံကိုပြပါဆိုလျှင် ဆီးရီးယားကို လူအများစုက လက်ညှိုးထိုးကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအတိုင်းဖြစ်အောင်လည်း အမေ ရိကန်နှင့် သူ့အပေါင်းအပါတို့က လုပ်ဇာတ်ခင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ယခု ထိုထက်ပိုဆိုးနေသည့်နိုင်ငံက ဆော်ဒီနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သော ယီမင်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းစစ်ကို အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်အောင် အမေရိကန်ကဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး ဆော်ဒီကို နောက်ကွယ်မှ သွေးထိုးပေးခဲ့သောကြောင့် ယခုယီမင်သည် ဆီးရီးယားထက်ပိုဆိုး နေပြီဖြစ်သည်။
စစ်ပွဲဒဏ်ကို ခံစားနေရသည့်အပြင် ကမ္ဘာ့အဆိုးရွား ဆုံးကပ်ရောဂါဘေးနှင့်တွေ့ကြုံနေရပြီး နေ့စဉ် လူပေါင်း ရာနှင့်ချီသေဆုံးလျက်ရှိသည်။ စစ်ပွဲကြောင့် သေဆုံးသည့်အရေ အတွက်နှင့်ဆိုလျှင် ယီမင်တွင် နေ့စဉ် လူပေါင်း ၂ဝဝ ကျော် သေဆုံးနေရသည်။ ဆော်ဒီတို့လေကြောင်းထိုးစစ်က ဆေးရုံနှင့်ကျောင်းများကိုပင် အလွတ်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ကုလသမဂ္ဂက ဆော်ဒီကို အမည်ပျက် စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဆော်ဒီကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက် မှုပြစ်ဒဏ်နှင့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှု တစ်စုံတစ်ရာ မလုပ်ခဲ့ပေ။ ဆော်ဒီနောက်တွင် အမာခံ အမေရိကန်ကရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဇွန်လတွင် ယီမင်နိုင်ငံ၌ ကာလဝမ်းရောဂါကူးစက်မှု ၂ဝဝဝဝဝ အထိရှိခဲ့ပြီး ယခုတစ်လအတွင်း ကာလအကြာမှာပင် နောက်ထပ် သောင်း၊ သိန်းချီကာ ထပ်မံကူး စက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ယခု ဝမ်းရောဂါကူးစက်မှု သုံးသိန်းနီးပါးအထိရှိလာခဲ့ပြီး အားနည်းသောကလေးများမှာ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်သေဆုံးရသည်။ ယီမင်နိုင်ငံ၌ စစ်ပွဲကြောင့် မသေဆုံးလျှင် ရောဂါကြောင့် သေဆုံးရပြီး ကလေးရှိသည့်မိခင်တိုင်းပြောသည့်စကားမှာသူတို့ကလေးတွေကို ဘုရား သခင် ဆီမှာထားခဲ့ရတော့မှာဆိုသည့် မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသော စကားသံများသာဖြစ်သည်။
ဆေးရုံ၌လည်း ဆေးဝါးကပြတ်နေပြီး ကုလသမဂ္ဂက ယီမင်အတွက်တောင်းခံထားသည့် တစ်နှစ်စာရန်ပုံငွေသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အလှူရှင် များဆီမှ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် အတွက် ရရှိထားသည့် နိုင်ငံတကာရန်ပုံငွေသည် တောင်းခံသည့်ငွေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံသာရရှိခဲ့သည်။ ထိုငွေသည် ယခုနှစ် ကုန်တွင် ကူးစက်ခံရမည့် ဝမ်းရောဂါ အရေအတွက်ကို ကုစားရန်လုံလောက်ရုံမျှသာရှိနေသည်။ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် အကုန် တွင်ယီမင်၌ ဝမ်းရောဂါကူးစက်မှု နှုန်းသည် ၆ဝဝဝဝဝ အထိရှိလာသည်။ သန့်ရှင်းသည့် ရေမရရှိခြင်းက ဝမ်းရောဂါဖြစ်စေရန် အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး ရေကိုလက်နက် တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းက ပြည်သူများအတွက် အဆိုးရွားဆုံးဖြစ် စေခဲ့သည်။ ပြည်သူ ၁၂ သန်းကျော် အစာရေစာပြတ်လပ်မှုကိုခံစားနေရပြီး ထိုအထဲမှ ကလေးငယ်နှစ်သန်းသည် အဆိုးရွားဆုံး အာဟာရချို့တဲ့မှုဒဏ်ကို ခံစားနေရသည်။
ယခုအတိုင်းသာ ပြည်တွင်းစစ်ကထပ်ဖြစ်နေဦးမည် ဆိုလျှင် ယီမင်တွင် အဆိုးရွားဆုံး ဝမ်းရောဂါကူးစက်မှု နှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေဆုံးမှု ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်မည် ဖြစ်သည်။ ဟူသီတို့ လက်နက်မချမချင်း ဆော်ဒီက ငြိမ်းချမ်းရေးမယူဘဲ ဆက်တိုက်နေမည်ဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ ဝင်လည်းမရ၊ အမေရိကန်ဝင်လည်းမရ၊ အီဂျစ်ဝင် လည်းမရဖြစ်နေသည်။
သို့သော် ဆော်ဒီဗုံးကြဲမှုတစ်ခုတည်းဖြင့် ယီမင်ပြည်တွင်းစစ်က ဟူသီတို့၏အရှုံးကို အဆုံးအဖြတ် ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သူ့နောက်တွင် အီရန်က အမာခံ လက်နက်ပံ့ပိုးပေးနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လိုအပ် သည့် လက်နက်မှန်သမျှကို အီရန်ကရေကြောင်းမှ ပံ့ပိုးပေးနေပြီး ဟူသီတို့ အင်အားကလည်း သမ္မတဟောင်းမန်ဆောဟာဒီနှင့် မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းတိုက်ခိုက်မှုပိုင်းတွင် သမ္မတဟာဒီ ဆော်ဒီ ကို ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်အထိ ဟူသီတို့ အင်အားကသာခဲ့ပြီး အကယ်၍ အမေရိကန်နှင့် ဆော်ဒီသာဝင်မပါလာလျှင် ဟူသီတို့ ယီမင်
တစ်နိုင်ငံလုံးကို သိမ်းပိုက်နေနိုင်မည်မှာသေချာသည်။ ယခု ဆော်ဒီကြောင့် စစ်ပွဲက ခက်ခဲသွားခဲ့ပြီး ရှီးယိုက်ဟူသီတို့ အာဏာရှိနေမှုကို ဆော်ဒီက ကြည့်မနေနိုင်ပေ။
သူ့ရန်သူကို သူ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သဖြင့် ဆော်ဒီ အဖြစ် မခံနိုင်ပေ။ရှီးယိုက်ဆိုသည်နှင့် အီရန်၏ သစ္စာတော်ခံဖြစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ရေးအရ အီရန်၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ဟူသီတို့ကျိန်းသေခံရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောက်တရားကြောင့်သာ ဆော်ဒီက ဟူသီတို့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးမယူခြင်းဖြစ်သည်။
ယခု ယီမင်ပြည်တွင်းစစ်ကနှစ်နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သေဆုံးသူအရေအတွက်က ဆီးရီးယားထက်ပင် ပိုမိုမြင့်တက်လာနိုင်သည့်အနေအထားဖြစ်ပြီး စစ်ပွဲကြောင့် သေဆုံးရသည်ထက် ရောဂါကြောင့် သေဆုံးခြင်းနှင့် အစာရေစာငတ်ပြီးသေဆုံးမည့်အရေးက ပိုများ နေသည်။ ထိုအရေ အတွက်က လေးသိန်းထိ ရှိနေသောကြောင့် ဆီးရီးယား သေဆုံးသူ
ယခုဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်က အမေရိကန်နှင့် ရုရှားတို့ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းနေပြီဖြစ်သည်။ အပစ်ရပ်စဲရေးက တစ်လနီးပါးအသက်ဝင်တည်မြဲနေပြီး နောက်ထပ် အမေရိကန်နှင့် ရုရှားတို့ တွေ့ဆုံမှုဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင် မည်ဖြစ်သည်။
ယီမင်ကတော့ ထိုသို့မဟုတ်။ နှစ်နှစ်အတွင်းရရှိခဲ့သည့် အပစ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်များကို ဆော်ဒီတို့ဘက်မှဗုံးကြဲခြင်းကြောင့် ကျိုးပေါက်ခဲ့ရပြီး ယီမင်ပြည်တွင်းစစ်ထဲသို့ မကြာမီ ရုရှားဝင်ရောက်လာမည့် အရိပ်အယောင်များလည်း မြင်နေရသည်။ ရုရှားဝင်လာခဲ့မှသာ ယီမင်ပြည်တွင်းစစ်လည်း ရပ်တန့်ရန် လမ်းစရှိမည့် အနေ အထားလည်းဖြစ်သည်။ ယခုစစ်ပွဲကတစ်ဖက် စောင်းနင်းဖြစ်နေသည်။
ဟာဒီဘက်က အမေရိကန်နှင့် ဆော်ဒီဦးဆောင်သည့် အာရပ်ညွန့်ပေါင်း တပ်ဖွဲ့ ရှိသည်။ ဟူသီတို့ဘက်က အီရန်တစ်နိုင်ငံတည်းသာရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ဆီးရီးယားကိုကြားဝင်သကဲ့သို့ ရုရှားတို့ ဝင်ရောက်လာနိုင်သည်။ အကယ်၍ မဝင်ရောက်ခဲ့ပါက နှစ်ကုန်လျှင် ယီမင်တွင် သေဆုံးသည့်အရေအတွက်သည် ထင်မှတ်မထားနိုင်လောက် အောင် ဆိုးရွားသွားခဲ့မည်ဖြစ်သည်။
အဓိကပြဿနာမှာ ပြည်တွင်းစစ်ထက် ဝမ်းရောဂါကပိုဆိုးနေသည်။ ဆေးဝါးပံ့ပိုးရေးနှင့် အစားအသောက် ပံ့ပိုးပေးရေး ယာဉ်များကိုဆော်ဒီလေကြောင်းက တိုက်ခိုက်နေသောကြောင့်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရန်မဆိုထားနှင့် ညဘက်ရောက်တိုင်း ဗိုက်ဟောင်းလောင်း နှင့် အိပ်ရာဝင်ခဲ့ရသည့် ရက်များစွာပင်သန်းချီသော ယီမင်ပြည်သူများ တွေ့ကြုံ ခဲ့ရသည်။
ယခု အမေရိကန်က ယီမင်ပြည်တွင်းစစ်ကိုမျက်ကွယ်ပြုထားသည်။ ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာများတွင်မပါအောင် သူတို့ကိုယ်တိုင် သတင်းအမှောင်ချထားသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၏ ကြားဝင်မှုကို ယီမင်လိုအပ်နေပြီး မဟုတ်ပါက ယီမင်ပြည်တွင်း စစ်နှင့်ကာလဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားမှု ပြဿနာသည် သမိုင်းတွင် စံချိန် သစ်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြ လိုက်ရပါသည်။ ။
အများစုဟာ စားသောက်တဲ့အစားအစာတွေမှာ ဗီတာမင်ဘီ လုံလောက်စွာပါရှိမနေပါဘူး။ ဖောလစ်အက်စစ်၊ ဗီတာမင် B6 နဲ့ B12 တို့ ချို့တဲ့မှုကြောင့် Homocysteine လို့ခေါ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်စစ်တွေများပြားလာကာ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ လေဖြန်းခြင်းနဲ့ နှလုံးရောဂါများ ရရှိလာနိုင်ပါတယ်။ Homocysteine ပမာဏ ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေဖို့အတွက် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိမ်းများ စားသင့်ပါတယ်။
ဟင်းနုနွယ်ရွက်လို အစိမ်းရင့်ရောင်ရှိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သံပရိုသီး၊ ထောပတ်သီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ကညွတ်၊ သကြားသီးနဲ့ ပဲမျိုးမျိုး။
Omega3(ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဆီများ)
အဆီတွေ၊ ဆီများတဲ့အစာတွေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ မသင့်တော်လို့ များများမစားသင့်ဘူးဆိုပေမယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အိုမီဂါ ၃တို့ကို အဆီတွေကိုတော့ စားပေးသင့်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ အာရုံကြောတွေ ဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်ချောမွေ့အောင်၊ အချက်အလက်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်အောင် အိုမီဂါ ၃ အဆီက ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
တူနာငါး၊ ငါးသေတ္တာငါး၊ အယ်လ်မွန်သီး၊ သစ်ကြားသီး၊ ဖရုံစေ့။
စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေ ဖြေလျှော့ဖို့နဲ့ ရာသီအကြိုစိတ်ပြောင်းလဲမှုများကို လျော့နည်းစေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Neurotransmitter တွေ များများထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုဓာတ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လွယ်ခြင်းနဲ့ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်ခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာ ရပ်များဟာ မဂ္ဂနီဆီယမ် သတ္တုဓာတ်ချို့တဲ့ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပေါင်မုန့်၊ အစေ့အဆန်အမျိုးမျိူး၊ အယ်လ်မွန်သီ၊ နေကြာစေ့၊ ဖရုံစေ့။
ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ဒြပ်ပေါင်းများပါရှိတဲ့ အစာတွေ စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်ထဲ Tryptophan ဓာတ်တွေ စုပ်ယူနိုင်စွမ်း ပိုမိုများပြားစေပါတယ်။ ကွေကာအုတ်တို့လို Glycaemic Index (GI) နည်းတဲ့ အစာတွေရွေးစားပါ။ GI နည်းတဲ့အစာတွေဟာ သွေးတွင်းသကြးဓာတ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း မြင့်တတ်လာစေပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ရုတ်တရက် မြင့်လာခြင်း၊ ကျဆင်းလာခြင်းတို့ကို မဖြစ်စေပါဘူး ဒါကြောင့် သင့်ကို တစ်နေကုန် အင်အားရှိစေ၊ ပျော်ရွှင်စေပြီး စိတ်ခံစားမှု ပြောင်းလဲလွယ်တာမျိုး မဖြစ်စေပါဘူး။ လတ်ဆက်တဲ့ သစ်သီးများမှာ ပါတဲ့ သကြားဓာတ်ကလည်း ရိုးရိုးသကြားထက်စာရင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို မျှတအောင် ညှိပေးပါတယ်။
ကောက်ပဲသီးနှံများ( ဂျုံ၊ ကွေကာအုတ်)၊ ဆန်လုံးညို၊ လတ်ဆက်တဲ့ သစ်သီး။
စိတ်ကို လန်းဆန်းသွက်လက်တတ်ကြွစေနိုင်တဲ့ Neurotransmitter တွေဖြစ်တဲ့ ဒိုပါမင်း နဲ့ နော်အပီနက် ဖရင်း(Norepinephrine) တို့ကို နေ့လယ်ဘက်တွေမှာ ဦးနှောက်က ထုတ်ယူနိုင်စွမ်း လျော့နည်းနေတတ်ပါတယ်။ ပရိုတင်းဓာတ်ပါရှိ်တဲ့ အစာတွေ စားသုံးခြင်းဖြင့် ဒီ Neurotransmitter တွေရဲ့ ပမာဏကို များပြားစေနိုင်တဲ့ Tyrosin ဓာတ် ပိုမို ထွက်ရှိလာတဲ့အတွက် စိတ်ကို ပြန်လည် လန်းဆန်းတတ်ကြွစေနိုင်ပါတယ်။
အဆီ အနည်းငယ်သာပါရှိတဲ့ အမဲသား၊ ကြာက်သား၊ ဘဲသား (အရေခွံခွာစားပါ)၊ အဆီနည်းတဲ့ နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ ပဲအမျိုးမျိုး။
ကျွန်မတို့ ဦးနှောက်ထဲမှာ ရေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့အတွက် ဆဲလ်အမြှေးများ ချောစေနိုင်ဖို့အတွက် ရေဓာတ် အလုံအလောက် လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်ပါက သင်ဟာ ခေါင်းမူးပြီး မောပန်းနွမ်းလျကာ ရေငတ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် တစ်နေ့ကို ရေနှစ်လီတာ (ရေသန့်ဘူ နှစ်လူးစာ) သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
Septrin ဆက်ပ်ထွန်ဆေးနဲ့ HIV
ဆရာရှင့် CD4 ဘယ်လောက်ဆို HIV လူနာတွေကို Septrin တိုက်ပါသလည်းရှင့်။ ကျေးဇူးပြု၍ပြောပြပေးပါရှင့်။
မနက်ဖြန် ဆရာကိုပြန်ပြောရမှာမို့လို့ပါရှင့်။ သမီးရှာမရလို့ပါရှင့်။ Septrin prophylaxis in HIV အကြောင်းသိချင်လို့ပါရှင့်။
Septrin ဆက်ပ်ထွန်ဆေးဟာ Cotrimoxazole ဖြစ်တယ်။ Trimethoprim နဲ့ Sulphamethoxazole 80 mg/400 mg ဆေးတွေ ရောထားတာဖြစ်တယ်။ ဆေး၂ မျိုးလုံးကနေ ဗက်တီးရီးယားတွေကနေ ဖေါလစ်အက်စစ် ခေါ် ဗီတာမင် ဘီ-၉ ထုတ်လုပ်မှာကို တားဆီးပေးတယ်။
HIV ပိုးရှိနေသူတွေကို Pneumocystis pneumonia (PCP) ခေါ် နူမိုးနီးယားဖြစ်မလာစေအောင် ကာကွယ်ဘို့သုံးပါတယ်။ WHO သတ်မှတ်ချက်က CD4 cell counts 500 cells/mm3 အောက်သာရှိသူတွေကိုပေးစေတယ်။ ၂ဝဝ၆ တုန်းကတော့ CD4 cell counts 200cells/mm3 လို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ ကလေးတွေကိုတော့ CD4 ကြည့်မနေတော့ဘဲ ပေးတယ်။ ဆေးဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေဆိုးရင်တော့ ဆေးပေးတာရပ်မယ်။ G6PD ကလေးတွေကို Dapson ဆေးနဲ့ အစားထိုးတယ်။ HIV-positive ကိုယ်ဝန်ဝန်ဆောင်တွေကိုလည်း Cotrimoxazole ပေးတယ်။
Cotrimoxazole ဆေးက Toxoplasmosis ရောဂါနဲ့ တခြားဗက်တီးရီးယားတွေကနေလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။ Shigella ပိုး၊ Salmonella ပိုး၊ ဆီးလမ်းပိုး၊ isosporiasis ရောဂါနဲ့ bronchitis ခေါ် လေပြွန်ရောင်တာတွေကို ကုသရာမှာလည်း သုံးတယ်။ နာပိုးဝင်ခြင်း၊ ခရီးသွားဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဆီးအောင့်ခြင်းအတွက်လည်း ပေးတယ်။
ကလေးတွေအတွက်လည်း သုံးတယ်။ အများအားဖြင့် မချမ်းသာသေးတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ အသုံးများတယ်။ နူမိုးနီးယားနဲ့ တချို့ တီဘီ နဲ့ ငှက်ဖျားအတွက်ပါ သုံးနိုင်တယ်။
ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုများ = ကိုယ်ပူ၊ အရေပြားအနီပြင်ထွက်၊ ပျို့၊ သွေးဖြူဥနည်း၊ ချမ်း၊ ဝမ်းလျှော။ ရေများများသောက်ရန်လို။ ကျောက်ကပ်မကောင်းသူ မသင့်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေ ထိရောက်မှုနည်းစေနိုင်။
ဆေးပြားမှာ Single-strength (SS) = (80 mg + 400 mg) အမျိုးအစားနဲ့ Double-strength (DS) = (160 mg + 800 mg) အမျိုးအစားလို့ ရှိတယ်။ ဆေးရည်မှာ 80 mg/10 mL + 400 mg/10 mL ရှိတယ်။ ထိုးဆေးမှာ 80 mg/5 mL + 400 mg/5 mL ရှိတယ်။ အများအားဖြင့် 1 DS တပြား တနေ့ ၂ ကြိမ် သို့ SS ၂ ပြား တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။
စက္ကန့် ၆၀ အတွင်း အိပ်ပျော်စေမယ့် နည်းလမ်း
ညအိပ် မပျော်သူများအတွက် အိပ်ပျော် မြန်စေမယ့် နည်းလမ်း အသစ်ကို ဟားဗတ်စ် တက္ကသိုလ်မှ ထရိန်နာ Dr Andrew Weil မှ မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ အရင် တုန်းက လူသုံးများတဲ့ နည်းလမ်းက ဓာတ်ပုံထဲမှာ သိုးဘယ်နှစ်ကောင် ပါသလဲ ဆိုတဲ့ ဥာဏ်စမ်းဖြစ်ပြီး အချို့အတွက်က အဆင်မပြေပါဘူး။ ယခု နည်းလမ်း အသစ်ကတော့ 4-7-8 technique (၄-၇-၈ စနစ်) ဖြစ်ပါတယ်။
၄ စက္ကန့်စာ အသက်ရှူသွင်းမှုကို ပြုလုပ်ပါ။ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး နှာခေါင်းဖြင့်သာ လုပ်ရပါမယ်။
ပြီးရင် ၇ စက္ကန့်စာ အသက်အောင့်ထားပါ။
ပြီးရင် ၈ စက္ကန့်စာ လေထုတ်ပါ။ လေကို ထုတ်တဲ့ အခါ နှာခေါင်းကနေ မထုတ်ပါနဲ့။ ပါးစပ်ကနေ ထုတ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး လျှာကို အပေါ်သွားနောက်ကျောက သွားဖုံး အသားကို ထိထားပါ။ ဒီတော့ လေထုတ်တဲ့အခါ ရှူ.... ဆိုပြီးတော့ အသံ ထွက်လာ ပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီ ၄-၇-၈ လေရှု၊ အသက်အောင့်၊ လေထုတ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို သုံးခါ တိတိ ပြုလုပ်တဲ့အခါ အိပ်ပျော်ချင်သွားပါလိမ့်မယ်။ စုစုပေါင်း သုံးခါ တိတိ လုပ်ရင် ၅၇ စက္ကန့်ပဲ ကြာပါမယ်။
ယင်း နည်းလမ်းကို စကျင့်တဲ့အခါ အိပ်မပျော်နိုင်ဘူးလို့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် မနက်အိပ်ယာထတဲ့ အချိန်နဲ့ ညနေ အိပ်ခါနီး အချိန်မျာ ပုံမှာ ကျင့်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျင့်ပြီးတဲ့ တစ်ပတ် အကြာမှာတော့ သိသိသာသာ တိုးတက်လာပြီး ညအိပ်မပျော်တဲ့အခါ ယင်းနည်းလမ်းနဲ့ လုပ်တဲ့အခါ အိပ်ပျော်သွားပါ လိမ့်မယ်။
ယင်းကျင့်စဉ်ဟာ ယောဂ ကျင့်စဉ်ကနေ ထွက်ရှိလာတာဖြစ်တာကြောင့် အခြား ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်။
ညအိပ်ရာဝင်ချိန် ခြေထောက် ရေဆေးခြင်းဖြင့် ရောဂါ အမျိုးမျိုးကို သက်သာ စေနိုင်သည်။ ကြွက်တက် ရောဂါ၊ အဆစ်ရောင် အဆစ်ကိုက် ရောဂါ၊ လေးဘက်နာ ရောဂါ၊ သွားနှင့် သွားဖုံးရောင်၊ သွားဖုံးကြွ ရောဂါ၊ မျက်စိတိမ် ရောဂါနှင့် မျက်မှန်ဒီဂရီ တိုးခြင်း၊ အစာအိမ် လေပူထခြင်း၊ လေပူအထက် တက်၍ မူးမော ရင်တုန်၊ နှလုံးလေရိုက် ရောဂါများပင် သက်သာသည်ဟု ဆိုသည်။
ခြေဆေးလျှင် လုံချည်၊ ထဘီကို ပေါက်လယ် ထိအောင် မတင်ပြီး ရေအေးဖြင့် ခုနှစ်ခွက်ခန့် လောင်းဆေးသင့်သည်။ ခြေဆေးပြီးနောက် ခေတ္တ အပူထွက်အောင် စောင့်ပြီးမှသာ အဝတ်ခြောက်ဖြင့် သုတ်သင့်သည်။ နေ့စဉ်မှန်မှန် ပြုလုပ်မှသာ အကျိုးရှိမည့် နည်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီစာတင်တာ နှစ်ပတ်လည်နေ့။ မနေ့က သွေးလှူပြီး မူးတဲ့မိန်းကလေးတယောက် သွေးထပ်လှူလို့ရမလား မေးတယ်။
၁။ ဆရာခင်ဗျာ မိန်းကလေးတယောက် သွေးလှူပြီး သတိလစ်ဖူးပါသည်။ အခုဖြူဖပ်ဖြူရော်ဖြစ်နေလို့ သွေးအား အမြန်တက်စေရန် မည်သို့ပြုလုပ်ပေးရမည်ကို လမ်းညွှန်ပေးစေချင်င်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
၂။ ကျတော့်အမျိုးသမီး အသက်က (၂၄) နှစ်ပါ၊ (၂၂) နှစ်တုန်းက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျလို့ သားအိမ်ခြစ်ဘူးပါတယ်။ သားအိမ် ခြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ထိခိုက်ရှနာ တစ်ခုခုဖြစ်လို့ သွေးထွက်လာတာမြင်ရင် ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက်ချင်သလို ဖြစ်နေပြီး ပျို့ပြီး အန်ချင်လာသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာ၊ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကို ညွှန်ကြားပေးပါဦး။
၂ဝ၁၅ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ စစ်ရေးပြပွဲမှာ ချီတက်အလေးပြုရတဲ့ အမျိုးသမီးတချို့ မူးမေ့လဲကျတဲ့သတင်းတွေ ဖတ်ရပါတယ်။ ဒေလီမှာ ယမုန်နာအခမဲ့ဆေးခန်းလေးဖွင့်တော့ ဗမာစကားလဲတတ်တဲ့ ပညာအခြေခံအတော်အတန်ရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်မိန်းကလေးတွေကို စည်းရုံးရတယ်။ ဆေးခန်းမှာ ဆရာမလာလုပ်ပါလား။ အချိန်လဲပေးနိုင်၊ ဝါသနာလဲပါ၊ ဒါနဲ့မရသေးတာက သွေးမြင်ရင်မမူးချင်မှ ဆရာမလုပ်လို့ရမယ်။ ထောက်ပံ့ကြေးတော့ မပေးနိုင်ပါ။
လူကောင်းပကတိကနေ ရုတ်တရက်မူးပြီး သတိမေ့တာ Shock ပါဘဲ။ ရှော့ခ်တွေက အမျိုးအစားများတယ်။ နှလုံးနဲ့ သွေးကြောတွေက လိုသလောက်အလုပ်မလုပ်နိုင်တာကနေဖြစ်တယ်။ လူ့ကိုယ်က အရေးပါတဲ့အင်္ဂါတွေတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ အောက်စီဂျင် မလုံလောက်လို့ ဖြစ်လာစေတယ်။ အသက်ဆုံးပါးတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။
(၁) စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာ၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်လာ၊ မူးလဲမယ်။
(၄) မျက်စိကဝေဝါး၊ သူငယ်အိမ် ကျယ်လာမယ်။
(၅) အသက်ရှူတာ တိမ်-မြန်-မမှန်ဖြစ်မယ်၊
(၆) အရေပြား အေးလာ၊ ဖြူရော်လာ၊ စိုထိုင်းလာမယ်၊
(၇) လက်ကောက်ဝတ် သွေးခုန်တာ မြန်မယ်၊ စမ်းမရဖြစ်မယ်။
Hypovolemic Shock သွေးထုထည် နည်းလို့ဖြစ်တဲ့ (ရှော့ခ်)၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ အတွင်းထဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်ကို ဖြစ်ဖြစ် သွေးယိုထွက်တာ၊ မီးလောင်လို့ အရည်တွေ ခမ်းခြောက်တာ၊ အန်လို့-ဝမ်းလျှောလို့ ရေနဲ့ ဓါတ်ဆားတွေ နည်းတာကြောင့် ဖြစ်တယ်။
Neurogenic Shock အာရုံကြောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရှော့ခ်၊ သွေးကြောတွေ ပုံမှန်မဟုတ် ဖေါင်းလာလို့ သွေးတွေ လိုရာမရောက် ဖြစ်လာမယ်။ အော်တိုနောမစ် အာရုံကြောစနစ်ကို သက်ရောက်လို့ ဖြစ်တယ်။ သွေးဖိအား ကျမယ်၊ တခါတလေ နှလုံးခုန် နှေးတတ်တယ်။ ဦးနှောက်ကို သွေးပြန်ရောက်ရင် ပြန်ကောင်းမယ်။ ဦးနှောက် ထိခိုက်တာ၊ ခါးဆစ်ရိုးထဲက အာရုံကြောစနစ် ထိခိုက်တာတွေ ကြောင့်လဲ ဖြစ်တယ်။ အတွင်း အင်္ဂါတွေကို ထိခိုက်လာမယ်။
Psychogenic Shock စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရှော့ခ်၊ ကြောက်စိတ်များ၊ အပျော်လွန်၊ ဒေါသကြီး၊ ပူပန်မှုလွန်ကဲရာကနေ ဖြစ်တယ်။ သွေးကြောတွေ ကျယ်လာတယ်။ ဦးနှောက်ကို သွေးအရောက်နည်းတယ်။ သွေးဖိအားကျမယ်၊ အရေပြား အေးစက်နေမယ်။ ချွေးပြန်မယ်။ နှလုံးခုန်မြန်မယ်။ သတိတဝက်တပျက်မရတာနဲ့ လုံးဝသတိမရတာဖြစ်မယ်။
Anaphylactic Shock အနာဖလက်တစ် ရှော့ခ်၊ မတည့်တာနဲ့ ထိတွေ့ရာကနေဖြစ်တယ်။ ယားယံလာမယ်၊ အနီပိန့်တွေထွက်မယ်၊ အသက်ရှူခက်လာမယ်၊ ဆီးသွားချင်-ဝမ်းသွားချင်ဖြစ်လာမယ်။ ပူလောင်လာသလို ခံစားရမယ်၊ အသံပျောက်မယ်။ ဆေး၊ အဆိပ်၊ အင်းဆက်၊ အမှုံအမွှား၊ အစားအသောက်၊ စတာတွေကနေ ဖြစ်စေတယ်။
Shock ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ -
ရုတ်တရက် ချက်ချင်းဖြစ်တာမို့ ရှေးဦးသူနာပြု လုပ်ဘို့ အလွန့်အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ အသက်ကို ကယ်နိုင်တယ်။ ဆရာဝန်တွေ၊ ဆေးရုံတွေဆီ ရောက်မှဆိုရင် နောက်ကျတတ်တယ်။ ပြုစုမဲ့သူက တည်ငြိမ်ရမယ်။ တတ်ထားရမယ်။
(၁) အသက်ရှူလမ်း စစ်ရ၊ ပြင်ရမယ်။ ပိတ်ဆို့နေတာ မရှိစေနဲ့။ လည်ပင်းဆန့်၊ မေးကိုပင့်ပါ။
(၂) သွေးယိုတဲ့နေရာကို သွေးမထွက်အောင်လုပ်ပါ။ ဖိထားပေးပါ။ မြှင့်ထားပေးပါ။ ပတ္တီး-ကြိုးနဲ့ စည်းထားပေးပါ။ Artery forceps သွေးကြောညှပ် ရှိရင်-လိုရင် သုံးပါ။
(၃) ခြေထောက်ပိုင်းကို ခေါင်းအထက်မှာ မြှင့်ထားပါ။ အန်နေရင် ခေါင်းတဖက် စောင်းထားပါ။ ခေါင်း-လည်ပင်း ကျိုးရင်-ကျိုးတယ် ထင်ရင် ပက်လက်အနေအထားမှာသာ ထားပါ။
(၄) အရိုးကျိုးရင် အမာတခုခုနဲ့ ကြပ်စည်းပါ။ ဆွဲမဆန့်ပါနဲ့။
(၅) သက်တောင့်သက်သာ နေပါစေ။ အေးနေရင် စောင်စတာနဲ့ နွေးအောင် ခြုံပေးပါ။ စို-အေး နေတာတွေ ဖယ်ရှားပါ။ သဘာဝမဟုတ်တဲ့ အနွေးပေးတာမျိုး မသုံးပါနဲ့။
(၆) လူနာကို စိတ်ငြိမ်အောင် အားပေးနှစ်သိမ့်ပါ။ သူ့အနာဒဏ်ရာကို မမြင်စေပါနဲ့။
(၇) အန်နေလျှင်၊ အဆိပ်စတာ မသေခြာလျှင် ပါးစပ်က ဘာမှမတိုက်ပါနဲ့။ အာခေါင်ခြောက်-ရေဆာရင် နှုတ်ခမ်းကိုသာ ရေဆွတ်ပေးပါ။
(၈) ဆေးပညာတတ်ကျွမ်းသူ အကူအညီခေါ်ပါ။
အမေရိကားမှာဖြစ်ရင် Choking game လို့ခေါ်တယ်။ အင်္ဂလန်မှာ ဗီတိုရီးယားခေတ်တုံးက အမျိုးသမီးတွေ ဒီလိုဖြစ်ကြတာက Corsets ကိုယ်ကြပ်အဝတ်အစားတွေကြောင့် အသက်ရှူကြပ်တာလဲပါနိုင်တယ်။ မူယာမာယာလဲပါမယ်။ ခဏခဏမူးလဲကြလို့ Fainting game လို့ ခေါ်ရလောက်အောင် လူစည်စည်မှာ လှလှပပလေးလဲကြတာများတယ်။
H5N1 Flu ကြက်ငှက် တုပ်ကွေး
ဘီဘီစီ ၂၉-၇-၂ဝ၁၇ သတင်း = ရန်ကုန်မြို့မှာ H5 N1 ရောဂါကြောင့်လို့ မသင်ကာစရာ ကြက်သေဆုံးမှုရှိ
Avian influenza လို့လည်းခေါ်တယ်။ Bird flu လို့လည်းခေါ်တယ်။ ကြက်ငှက်တွေမှာ သက်ရှူလမ်းကို အလွန် ကူးစက်လွယ်တယ်။ လူကိုကူးစက်တာ တခါတလေမှသာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူကိုကူးစက်ရင် ၆ဝ% သေဆုံးနိုင်တယ်။
ပိုးရှိနေတဲ့ ကြက်ငှက်ရဲ့ အသည်းနဲ့ အသားကို ထိကိုင်မိရာကနေ ကူးစက်တယ်။ ပိုးရှိပတ်ဝန်းကျင်ကနေလည်း ကူးစက်လာနိုင်သေးတယ်။ လူကနေလူကိုကူးစက်တာ အင်မတန်ဖြစ်ခဲတယ်။
ကူးစက်ခံရရင် ပိုးဝင်ခံရပြီးနောက် ၂ ရက်ကနေ ၈ ရက်အကြာမှာ ရောဂါလက္ခဏာစပေါ်မယ်။ အဖျားကြီးမြင့်နိုင်တယ်။ မအီမသာဖြစ်မယ်။ လည်ချောင်းနာမယ်။ ချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ အသက်ရှူလမ်း ကူးစက်ရောဂါ၊ ချောင်းဆိုး၊ နူမိုးနီးယား။ အသက်ရှူ တို-ခက်ခဲ၊ ရင်ပတ်အောင့်မယ်။ ဗိုက်အောင့်၊ ဝမ်းပျက်။ စိတ်မူပြောင်း၊ တက်မယ်။ ကြွက်သားတွေနာမယ်။ တချို့မှာ မျက်စိနီရဲမယ်။ ဆိုးလာရင် အသက်ရှူခက်လာမယ်။ နူမိုးနီးယားရနိုင်တယ်။ ကံမကောင်းရင် သေနိုင်တယ်။
5. H5N1 လူမှာဖြစ်ရင် ဘယ်လို ကုသမလဲ
၁၉၉၇ မှာ ပဌမဆုံးလူကိုကူးတာ သိရပြီး၊ မှတ်တမ်းအရ လူပေါင်း ၆၂၂ ယောက်ရှိသွားပြီ။ သေဆုံးသူပေါင်း ၃၇၁ ယောက်ရှိနေပြီ။
ထိရောက်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုဟာ ပိုးရှိတဲ့နေရာနဲ့ ထိစပ်မှုမှန်သမျှကို ပိတ်ပင်တားမြစ်ရမယ်။ ကျန်းမာရေးဌာနတွေကနေ ရောဂါအကြောင်း၊ နောက်ဆုံးအခြေအနေစတဲ့ သတင်းတွေကို အများပြည်သူ အလွယ်တကူ သိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ထုတ်ပြန်ပေးနေရမယ်။ ရောဂါမပြန့်ပွါးအောင်လုပ်ဘို့၊ ဖြစ်နေသူတွေကို ချက်ချင်းကုသမှု ပေးနိုင်ဘို့ ပြင်ဆင်မှုတွေ မပြတ်တမ်း လုပ်နေရမယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် ကုသနည်းလမ်းညွှန်ကို ကျန်းမာရေးဌာနတွေမှာ ပေးထားရမယ်။ ဆေးဝါး၊ လူအင်အား ဖြည့်တင်းထားရမယ်။ ကြက်၊ ဘဲ၊ ငုံး၊ ငန်း၊ ခိုတွေမွေးမြူတဲ့နေရာတွေကို စစ်ဆေးတာ၊ ထိန်းချုပ်တာတွေကို ချက်ချင်းလုပ်ရမယ်။ ဥပဒေလိုရင်လုပ်ရမယ်။ မလိုက်နာသူကို အရေးယူရမယ်။ မွေးမြူရေးလုပ်ရာတိုင်းမှာ အဖုံးအကာ၊ ကိရိယာတွေသုံးစေရမယ်။
အစိုးရကျန်းမာရေးဌာန၊ တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးဌာန၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အများပြည်သူ စုပေါင်းလုပ်မှသာရမယ်။ သတင်းအမှားတွေပေးတာ၊ ကာကွယ်နည်း အလွဲတွေရေးတာ၊ ဖြန့်ဝေရောင်းချတာမျိုးတွေ မလုပ်ကောင်းပါ။
အစားအစာတွေမှာ ကောင်းတာရှိသလို့ ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်သည့်အစားအစာ များစွာလည်းရှိပါတယ် ။ တန်ဆေးလွန်ဘေး ဆိုသည့် မြန်မာ့စကားပုံ သတိဆောင်ရန်လည်းရှိနေပါတယ် ။ အသွားမတော် တစ်လှမ်း ၊ အစားမတော် တစ်လုပ် ဆိုပြီး အသိသတိထပ်မံပေးထားပြန်တာလည်း တွေ့ ရပါသည် ။ တစ်ချို့မိခင်ဖြစ်သူတွေမှာ အစားသောက်ကိုမြင်လျှင်ပင် မနေနိုင် စားချင်စိတ်ဖောက်ဖွားစားသောက်တက်ကြပါသည် ။ မိမိရင်သွေးကလေးကိုပင် သတိမထားမိဘဲ စားသောက်လိုက်ပေမဲ့ မိခင်နို့ နှင့် မကင်းကွာဖြစ်သည့် ကလေးငယ်တွင် ဝမ်းနှင့်ပတ်သက်သော ဝေဒနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာတက်ပါသည် ။ အထူးသတိထား စားသောက်သင့်ပါတယ်လို့ ပြောကြားလို ပါတယ် ။
ကလေးငယ်များတွင် ကျန်းမာရေး အသိများ မသိနားမလည်နိုင်ခြင်းကြောင့် တွေ့ တာ အစားသောက်များကို စားတက်ကြပါတယ် ။ ပူပြင်းသောရာသီဥတုတွင် စားတက်ကြသည်မှာ သရက်သီးကင် ၊ သရက်သီးသုတ် ၊ မုန်လာချဉ် ၊ ဖရဲသီး ၊ ပိန္နဲသီး ၊ ဝက်သားတုတ်ထိုး ၊ အအေးစိမ့်ထားသည့် နို့၊ ရေခဲရေများ နှင့် အခြားဝမ်းနူးစေတက်သောအစားသောက်ကို စားတက်ကြပါသည် ။ အဲလို ကလေးများ အစားသောက်မှားခြင်းကြောင့် ရက်မခြားဘဲဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတက်သည် ။
ကလေးသူငယ်များ ဝမ်းလျှောခြင်းဖြစ်ပေါ်လျှင် ဓာတ်ဆားရည်ကို တိုက်ပေးရမည့်အပြင် အစားသောက်ကိုလည်းကျွေးရပါမည် ။ အရည်ကိုလည်းပိုတိုက်ရပါမည် ။ ရေကျက်အေးပြု့ လုပ်ထားသော ရေ ၊ အုန်းစိမ်းရည် နှင့် သောက်ေ၇သန့် တို့ ကိုလည်း တိုက်ပေးသင့်ပါသည် ။ ကျွေးရမည်အစားအစာများမှာ အစိမ်းရောင်ရှိသော အရွက်များ ၊ ဆန်ပြုတ် ၊ ကြက်ဥနှစ် ၊ အသား နှင့် အဝါရောင်ရှိသော အသီးအနှံများကို ကျွေးပေးရပါမည် ။
တစ်ကိုယ်ရေသန့် ရှင်းခြင်းလည်း အထူးသတိထားရပါမည် ။ ဝမ်းသွားထားသော အဝတ်အထည်များ နေ၇ာများတွင် ကိုင်တွယ်ထားပါက လက်ကို ချက်ခြင်း ဆပ်ပြာဖြင့် နှစ်ကြိမ်ထက်မနည်း စင်ကြင်အောင်ဆေးကြောပါ ။ကလေးသူများနှင့် လူကြီးများတွင် အစားအသောက်မစားခင် လက်ကို စင်ကြယ်စွာဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးကြောပြီးမှာ ကျွေးခြင်း စားသောက်စေခြင်း နှင့် အစားသောက်များကို ယင်နားမှု့ မရှိစေရန် ဂရုစိုက်ပါ ။
ဝမ်းသွားခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်များတွင် ပျော့ခွေနေခြင်း ၊ အပြင်းအထန်ဖျားနေခြင်း ၊ မကြာခဏ အန်ခြင်း ၊ ကလေးငယ်တွင် မှေးနေခြင်း ၊ နှိုးရခက်ခြင်း ၊ အစားသောက်မစားခြင်း နှင့် သတိလစ်မှု့ ဖြစ်နေခဲ့ပါက နီးစပ်ရာ ဆေးခန်းနှင့် ဆေးရုံများတွင် ချက်ချင်းပြသ ကုသမှု့ ခံယူသင့်ပါကြောင်း ကလေးငယ်များ ဝမ်းသွားလျှင် အသိပေးစာဖြင့် တင်ပြလိုက်ရပါသည် ။
Kiss and Risks နမ်းတာကနေ ဘာရောဂါတွေရနိုင်သလဲ
ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ပြည့်အောင်မထိုးရသေးပဲနဲ့ ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ French kiss လုပ်မိရင် ရောဂါကူးနိုင်ပါသလား သိချင်ပါတယ်။
ဆေးစာမဖြေခင် အနမ်းဋီကာချဲ့ပါရစေ။ စာတပုဒ်ရေးထားတာရှိပေမဲ့ အများဖတ်စရာအနေနဲ့တော့ မတင်လိုပါ။ လျှာမပါဘဲ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းတာကို Light Kissing ခေါ်တယ်။ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းတာကို Lip kiss လို့ ပြောတာများတယ်။ တရားဝင် ခေါ်ကြတာက French kiss ဖြစ်ပါတယ်။ Deep Kissing လို့သတ်မှတ်တယ်။ အထဲထိနက်တယ်။ ဒီနမ်းနည်းမှာ တယောက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ နောက်တယောက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်း + လျှာနဲ့ ထိတွေ့မှုလုပ်ကြတယ်။ အပြန်အလှန်သဘော ရှိနိုင်တယ်။ တဖြေးဖြေးချင်းနဲ့ စိတ်လိုလက်ရ ရှိလာနိုင်တယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနမ်းတာနဲ့လဲ ရေယုံနဲ့ ဝဲ ကူးစက်နိုင်တယ်။ ထိစပ်တဲ့နေရာမယ် ရောဂါမရှိသူမှာ အပေါက်အပြဲ အနာအဆာရှိမှသာ ကူးမှာပါ။ တီဘီ (သလိပ်ထဲ ပိုးတွေ့)၊ တုပ်ကွေး၊ အအေးမိဖြစ်နေသူက နမ်းတာမခံပါနဲ့။မြင်သာတဲ့ မန်းရည်လို၊ ပြည်လိုအနာရှိနေသူကို သွားမနမ်းပါနဲ့။ ရေယုံ ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအား (၂)၊ အသည်းရောင် (ဘီ) နဲ့ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါတွေ ကူးနိုင်တယ်။ သွားရည်ထဲကနေ ရနိုင်တဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေ ရှိတယ်။
1. Mononucleosis မိုနိုနူကလီယိုးဆစ်ကို Kissing disease အနမ်းရောဂါလို့ခေါ်တယ်။ (EBV) နဲ့ (CMV) ဗိုင်းရပ်စ်တွေကနေ ကူးစက်တယ်။
2. စထွက်ပတိုကေားကပ်စ် ဗက်တီးရီးယားကြောင့် လည်ချောင်းနာရောဂါကူးလာနိုင်တယ်။
3. Cold sores ခေါ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းရေယုံဟာ Herpes Simplex Virus-1 (HSV-1) ဗိုင်းရပ်စ်ကနေကူးစက်တယ်။
4. လက်-ခြေ-ပါးစပ်ရောဂါဆိုတာ Coxsackie virus ဗိုင်းရပ်စ်ကနေကူးတယ်။
5. HIV ပိုးဟာ သွားရည်ထဲမှာပါနေနိုင်ပေမဲ့ အရေအတွက်နည်းလို့ မကူးဘူးလို့ (ကနေ့အထိ) ပြောနိုင်တယ်။
6. အသည်းရောင် (အေ)၊ (ဘီ) နဲ့ (စီ) တွေကတော့ နမ်းလို့ကူးတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့ လူနာတွေတွေ့ထားတယ်။
7. သွားဖုံးရောင်တာကို ဗီတာမင် (စီ) နည်းလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်။
8. Candida yeast infections မှိုပိုးဝင်နေလို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် ပဋိဇီဝဆေး သောက်နေချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တယ်။
ပြင်သစ်အနမ်းကနေ အသည်းရောင် (ဘီ) ကူးစက်ဘို့အခွင့်အလမ်း အလွန်နည်းပါတယ်။ (ဘီ) သာမက (စီ) နဲ့ (ဒီ) တွေလဲအတူတူဘဲ။ HIV ပါတယ်။ ရာနှုန်းပြည့် မကူးစက်ပါလို့ ဘယ်ဆရာဝန်ကမှ အာမမခံနိုင်ပါ။ သီအိုရီအရတော့ ကူးစက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေဟာ လူကိုယ်က အရည်တွေ မှန်သမျှထဲမှာ နေကြတယ်။ သွားရည်လဲပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနဲ့ အနီးအနားမှာ အနာအဆာရှိနေရင်တော့ ကူးစက်ဘို့အခွင့်အလမ်းပိုများတယ်။
ကိုယ်ကနေ တယောက်ယောက်ကိုနမ်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ်နမ်းလိုက်သူကိုနမ်းဘူးသူတွေ အားလုံးကို နမ်းသလိုဘဲလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ကိုယ်နမ်းတဲ့သူကို အရင် လူပေါင်းဘယ်လောက်က နမ်းထာသလဲသိပါသလား။ အဖေါ်အကြောင်း ကောင်းကောင်းမသိရင် အန္ကရာယ်နဲ့ မကစားတာကောင်းတယ်။ ငယ်တုံးရွယ်စဉ်မှာ French kiss ကို အဖေါ်တွေ အများကြီးနဲ့ လုပ်ခဲ့သူဟာ ဦးနှောက်မြှေးရောင်ရောဂါရစေဘို့ ပိုပြီးနီးစပ်တယ်လို့ သုတေသနတခုက ဆိုပါတယ်။ နမ်းရာကနေ ကူးစက်ရောဂါမရချင်ရင် နမ်းတာကိုသာဆင်ခြင်ပါလေ။
၁။ ကျွန်တော် ၄၁ နှစ်ရှိတဲ့ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသားပါ ဆရာ။ ကျွန်တော်နှာခေါင်းဘေးက အဖုဟာ ဖြစ်တာ ၃ နှစ် ကျော်သွားပါပြီဆရာ။ နာလဲမနာ ကြီးလဲ မကြီးပါဘူးဆရာ။ အဲဒီ အဖုက အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်လားဆရာ။ ပျောက်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ လမ်းညွှန်ပြသပေးပါဆရာ။ ဆရာတို့ မိသားစုအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။
၂။ ဆရာမင်္ဂလာပါ။ ရိုသေစွာမေးမြန်းလိုပါတယ်ရှင့်။ ကျမအစ်မ အသက် (၃၅) နှစ်ပါ၊ အပျိုပါဆရာ။ ရာသီကတလတခါ ပုံမှန် လာပါတယ်ဆရာ။ သူ့နောက်ကျောမှာ ၂၁၀၁ လောက်တည်းက အကျိတ်တခု ရှိပါတယ်ဆရာ။ ဆရာဝန်ပြကြည့်တော့ အဆီကျိတ်လို့ပြောတာနဲ့မခွဲခဲ့ပါဘူးဆရာ။ အခု သူ့အကျိတ်က ပြည်ထွက်နေလို့ပါဆရာ။ ပြည်ထွက်တာ (၅) ရက်လောက်တော့ ရှိပါပြီဆရာ။ ပြည်က တစက်နှစ်စက်လောက်ပဲထွက်တာပါဆရာ။ အကျိတ်နေရာက အသားအရောင်တော့ မပြောင်းပါဘူးဆရာ။ သူအလုပ်က အသုပ်ရောင်းတာဆိုတော့ ငရုတ်သီးကြော်တာ၊ ဆီိချက်ချက်တာတော့ လုပ်ရပါတယ်ဆရာ။ ပြည်ထွက်နေတော့ အကျိတ်အခြေအနေစိုးရိမ်ရလား သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
မမြင်ရ မစမ်းရပေမဲ့ မှန်းပြောပါမယ်။ ၂ မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ Lipoma ခေါ် အဆီကျိတ်နဲ့ Sebacious cyst ခေါ် ချွေးထွက်အိတ်အကျိတ်။ ဒုတိယဟာပိုဖြစ်နိုင်။ အရပ်ခေါ် ဆပ်ဆံခဲလို့ခေါ်တဲ့ အဖြူ-မီးခိုးရောင် ခပ်ပျစ်ပျစ်အရာ အောင်းနေတာ။ အဆင်မသင့်ရင် ပြည်တည်တတ်တယ်။ ၂ မျိုးလုံးမှာ အိတ်ခွံပါတယ်။ ပျောက်ဘို့ ခွဲရတယ်။ မခွဲလည်း ဘာမှမဖြစ်။ နည်းနည်းသာ ပိုကြီးနိုင်။ ပြည်တည်နိုင်။ ခွဲရင် အိတ်ခွံပါထုတ်မှသာ ထပ်မဖြစ်။ ကင်ဆာမဟုတ်။ ကင်ဆာ မပြောင်း။
၃။ မင်္ဂလာပါ ဆရာ။ သမီးနာမည်က့့ ပါ။ အသက် ၂၃။ မြစ်ကြီးနားမြို့ကပါ။ ရာသီလည်းမှန်ပါတယ်ရှင့်။ လည်ဂုတ် ဆံစပ်နားမှာ အကျိတ်တလုံးပေါ်လာပါတယ်။ ဘာရောဂါများ ဖြစ်နိုင်မလဲရှင့်။ စိုးရိမ်မိလို့ပါရှင့်။
အကျိတ်ကို တိတိကျကျပြောပါ။ တည်နေရာ၊ အရွယ်အစား၊ ပုံပန်း၊ ရွှေ့ရမရ၊ နာမနာ၊ အရောင်။
ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ လည်ဂုတ် ဆံစပ်နားမှာပါ။ အရွယ်အစား လက်သန်းလောက်ရှိပါတယ်။ အကျိတ်က လုံးဝန်းတဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရှိပါတယ်။ ရွှေ့လို့ရပါတယ်။ ဖိလိုက်ရင် နည်းနည်းနာပါတယ် အရောင် မရှိပါ။ ဆရာ လည်ပင်းနားမှာ နောက်ထပ် အကျိတ်တလုံးထပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ စိုးရိမ်ရလား။ ဆရာဝန်ပြသင့်မပြသင့်ဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ဆရာအားရင် ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်ဖြေပေးပါဦးနောဆရာ။
မေးခွန်းမေးသူက ကချင်အမျိုးသမီးတယောက်ပါ။ မေးခွန်းမေးတာရော စာရေးတာပါ ကောင်းတယ်။ သတ်ပုံလည်း သဏ္ဌာန်ကအစ မှန်တယ်။ တစ်လုံးကိုသာ ကျွန်တော့်စံအရ ပြင်လိုက်ပါတယ်။ ဆောရီး။ ရွှေဗမာတွေ နမူနာယူပါလေ။
အလုံး-အကျိတ် ခေါ်ကြတာတွေက လူကိုယ်မှာ နေရာမရွေး၊ ကျား-မ မရွေး၊ အရွယ်မရွေး ဖြစ်ကြတယ်။ အလုံး-အကျိတ် မှန်သမျှကို အခြေခံအားဖြင့် ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်တာဆိုပြီး ၂ မျိုးခွဲပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံးက Cysts (ဆစ်စ်) ဖြစ်တယ်။ အဖုံးပါတဲ့အိတ်ကလေးမျိုး ဖြစ်တယ်။ အထဲမှာ အရည်လိုဟာ အဖတ်လိုဟာ တမျိုးမျိုးရှိတယ်။ လူ့ကိုယ်မှာ နေရာမရွေး၊ လူမရွေး၊ အရွယ်မရွေး သိပ်ဖြစ်ကြတယ်။ အရွယ်အစားလည်း အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။ (ဆစ်စ်) ဘာလို့ ဖြစ်ရသလဲ။ အသုံးများလို့သဘော၊ ဇရာသဘောကနေဖြစ်တယ်။ ရောဂါပိုးဝင်လို့၊ မျိုးဗီဇချို့ယွင်းလို့ကနေဖြစ်တာ၊ မွေးရာပါဖြစ်တာ။ အရေပြားနဲ့ကပ်နေရင် စဖြစ်ကတည်းက သိသာမယ်။ ရင်သားလို အထဲမှာဆိုရင် စမ်းလို့ရအောင် ကြီးလာမှ သိတတ်တယ်။ အသည်းလို၊ ကျောက်ကပ်လို အင်္ဂါတွေမှာဖြစ်နေရင် ဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေ မခံစားရမချင်း သိသေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ X-ray, Ultrasound, CAT scan, MRI တွေ ရိုက်ရင်းမှ သိလာတာမျိုးလဲရှိတယ်။
အများစုကြီးက ကင်ဆာမဟုတ်ပါ။ တချို့က ကင်ဆာနဲ့ ရောဂါပိုးဝင်တာတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဘယ်လိုကုသမလဲ ဆိုတာ ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်လဲ နဲ့ ဘယ်နေမှာလဲ အပေါ်မူတည်တယ်။ ကြီးနေရင်၊ ရောဂါလက္ခဏာ ခံစားနေရရင် ခွဲစိတ် ထုတ်ပြစ်ရတယ်။ တခါတလေ အထဲက အရည်ကို စုတ်ထုတ်နိုင်တယ်။
1. Sebaceous cysts (Epidermal cysts) ချွေထွက်ဂလင်းအိတ်
အရေပြားမှာ ကျိချွဲချွဲအရည် အောင်းနေတယ်။ အနံ့ဆိုးတယ်။ မျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊ ကိုယ်၊ ဗဂျိုင်းနား နေရာတွေမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ချွေးထွက်အိတ်တွေ ရောင်တာ-ပိတ်တာကနေဖြစ်ဖြစ်၊ ထိခိုက်မိရာကနေဖြစ်ဖြစ် ဒီရောဂါဖြစ်တယ်။ မနာဘူး၊ ပိုးဝင်ရင်တော့ နာလာမယ်။ ဖြေးဖြေးချင်းကြီးတယ်၊ အရွယ်သေးတယ်၊ အရေပြားအောက်မှာ ဟိုဘက် ဒီဘက် ရွေ့လို့ရတယ်။ အတွေ့အကြုံများတဲ့ ဆရာဝန်တွေက မြင်တာနဲ့ တန်းသိတယ်။ တချို့က သူ့ဖါသာသူ ပျောက်နိုင်တယ်။ လိုအပ်ရင် ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်ရမယ်။ ထိခိုက်ရာဖြစ်ဖြစ်၊ ကုပ်မရာကဖြစ်ဖြစ် ပိုးဝင်လာတတ်တယ်။ ပြည်တည်လာတတ်တယ်။
2. Dermoid Cyst (ဒါးမွိုက်-ဆစ်စ်)
မွေးရာပါဖြစ်တယ်။ စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းတယ်။ အထဲမှာ အသေအခြာ စစ်ကြည့်ရင် ဆံပင်၊ အရည်၊ သွား၊ အရေပြား ချွေးထွက်အိတ် စတာတွေ ပါနေနိုင်တယ်။ ဖြေးဖြေးချင်း ကြီးတယ်။ ပေါက်အထွက်ရင် မနာဘူး။ ၄ နေရာမှာဖြစ်တယ်။
(က) Dermoid cysts in the brain ဦးနှောက်မှာဖြစ်တယ်။ အဖြစ်တော့ မများပါ။
(ခ) Dermoid cysts in the nasal sinuses နှာခေါင်း-ဆိုင်းနပ်စ်မှာဖြစ်မယ်။ ခွဲထုတ်ရတာ ခက်တယ်။
(ဂ) Ovarian dermoid cysts မျိုးဥအိမ်မှာ ဖြစ်တယ်။ မျိုးပွါးနိုင်တဲ့အရွယ်တွေမှာဖြစ်တယ်။ အညှာလိုရှိလို့ လိမ်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲလိုဖြစ်ရင် နာမယ်။ ချက်ချင်းခွဲရတတ်တယ်။ ဒီရောဂါကို ခွဲထုတ်လို့ အထဲကဟာတွေကြည့်ပြီး (အပင်း) လို့ပြောကြတယ်။ ပေါက်ထွက်တာ၊ ပိုးဝင်တာတွေလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ ရှားရှားပါးပါး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်။
(ဃ) Dermoid cysts of the spinal cord ခါးရိုးဆစ်ထဲက အာရုံကြောမှာဖြစ်တာ။ ပိုးဝင်တတ်တယ်။
(င) Dermoid cysts of head and neck မျက်နှာနဲ့ ဦးခေါင်းမှာ အဖြစ်မနည်းလှပါ။ Lipoma, sebaceous cyst ရိုးရိုး အကျိတ်နဲ့အတော်တူတယ်။ ခွဲယူပြီး ဖွင့်ကြည့်မှ အထဲမှာ ကိုယ်မွှေးလိုဟာတွေ တွေ့ရတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဗိုက်ထဲမယ် မျိုးဥအိမ်မှာဖြစ်တာနဲ့ သဘောဆင်တယ်။ ကြီးတာနဲ့ သေးတာသာကွာခြားတယ်။ အဲတာကိုတော့ အပင်းလို့လို့ ခေါ်ရမှန်းမသိကြပါ။
3. Ganglion Cyst (ဂင်ဂလီယွန်)
အဆစ်နေရာအထက်မှာ အရွတ်ကြောကို ဖုံးထားတဲ့အလွှာနဲ့ ဆက်ဖြစ်တယ်။ အထဲမှာ အရည်ကြည် ချွဲပြစ်ပြစ်ရှိတယ်။ ဂျယ်လီလိုဘဲ။ အသက် ၂ဝ-၄ဝ ကြားမှာ ၇ဝ% ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ပိုဖြစ်တယ်။ ၁ဝ နှစ်အောက်ဖြစ်တာ ရှားတယ်။ လက်ကောက်ဝတ်မှာ ၆ဝ-၇ဝ% ဖြစ်တယ်။ ၁-၃ စင်တီမီတာ ရှိမယ်၊ ရွေ့လို့မရဘူး၊ ကြီးလာလိုက် သေးသွားလိုက်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့မှာ နာမယ်။ ၃၈-၅၈% က အလိုလို သေးသွား တတ်တယ်။ စာအုပ်ထူထူ ကိုင်တာမျိုးကနေ ပျောက်တတ်လို့ Bible cysts လို့လဲ ခေါ်တယ်။ Aspiration စုပ်ထုတ်တာလဲ လုပ်တယ်။ စုပ်ပြီး (စတီရွိုက်) ဆေး ထိုးပေးတာလဲ လုပ်တယ်။ ၇၅-၈၅% ပြန်ဖြစ်တယ်။ ခွဲတာကောင်းတယ်။ အေးအေးဆေးဆေး ရက်ရွေး ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်ပါ။ ခွဲစိတ်ရတာ လွယ်မလိုလိုနဲ့ ပြန်ဖြစ်တတ်လို့ ဆရာဝန် နာမည်ကောင်းမရတတ်ဘူး။ ခုခေတ်မှာ Arthroscopic surgery ကင်မရာပါတဲ့ ကရိယာ သေးသေးလေးသုံး ခွဲတာမျိုး ပေါ်နေပြီ။
4. Cystic Acne and Acne Cysts ဝက်ခြံ (ဆစ်စ်)
မကြီးဘူး။ ပိုးဝင်ရာကနေဖြစ်လို့ နီနေမယ်။ သွေးဖြူဥတွေနဲ့ ဗက်တီးရီးယားတွေ စစ်တိုက်ကြတယ်။ ပြည်တည်လာမယ်။ ၁-၅ မီလီမီတာအထိ ရှိမယ်။ ဝက်ခြံကို ဆေးကုသလို ကုရတယ်။ ပြည်ရှိတာတော့ ထုတ်ရမယ်။ ညှစ်မရရင် ခွဲထုတ်ရတယ်။ ဝက်ခြံ ပျောက်အောင်လုပ်ရင် အဆင်မသင့်လို့ ပိုဆိုးလာရာကနေဖြစ်နိုင်တယ်။ အစားအသောက်ညံ့တာ၊ အသီးအနှံ၊ အသီးအရွက် မစားဖြစ်တာမျိုးကနေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗီတာမင် (အေ) နည်းရင်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ စိတ်-အလုပ် ရှုတ်ရင်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
အမျိုးအစား များသလားမမေးနဲ့ ရာကျော်နိုင်တယ်။ ရေးပြီးသားတွေကို အက္ခရာစဉ်လိုက်ရေးပါမယ်။ အနည်းအများလိုက် မဟုတ်ပါ။
1. Abscesses and boils အနာ ပြည်တည်နာ
2. Arachnoid cysts (Brain or Spinal cord) ဦးနှောက် နဲ့ ခါးရိုးထဲကအာရုံကြော
3. Bartholin's cyst ဗဂျိုင်းနား (ဘာသိုလင်-ဆစ်စ်)
4. Breast lump (ကင်ဆာ) မဟုတ်တဲ့ ရင်သား-အကျိတ်
5. Chocolate cyst ချောကလက် ဆစ်
6. Corn ငါးမျက်စိ
7. Cysts (ဆစ်စ်) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/cysts.html၏
8. Cysts in the breast (Fibrocystic disease) ရင်သား
9. Cysts of the glands within the eyelid (Chalazions) မျက်စိအတွင်းစွန်
10. Epidermal cysts of the skin (Epidermal inclusion cysts) အရေပြား
11. Ganglion cysts အဆစ်နေရာ
12. Giant-cell tumor of the bone (GCTOB) ကင်ဆာနဲ့တူတဲ့ အရိုး (ကျူးမား)
13. Hepatic cyst အသဲမှာ
14. Kidney cysts ကျောက်ကပ်ရေအိတ်
15. Liver Cysts အသည်းအိတ်ရောဂါ
16. Lumps or Bumps အလုံး-အကျိတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/lumps-or-bumps.html
17. Lymphangiomas (လင်ဖန်ဂျီယိုးမား) လည်ပင်း အကျိတ် တမျိုး
18. Myoma (Fibroid) သားအိမ်အလုံး
19. Nasal Polyps နှာခေါင်းထဲ အသားပိုဖြစ်ခြင်း
20. Neck Lumps လည်ပင်း အလုံးအကျိတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/neck-lumps.html
21. Neurofibromatosis ကော်ဖီရောင် အသားပိုလေးတွေ
22. Ovarian Cyst မျိုးဥအိမ်အကျိတ်
23. Ovarian cyst အပင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟာ
24. Ovarian cysts မျိုးဥအိမ်အိတ်များ
25. Ovarian dermoid cyst အပင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟာ
26. Pancreatic cysts သရက်ရွက်
27. PCOS and Ovarian cyst မျိုးဥအိမ်အိတ်
28. Pineal cysts (Pineal gland of the brain) ဦးနှောက်
29. Polycystic kidney disease ကျောက်ကပ်
30. Renal Cortical Cyst ကျောက်ကပ် အပြင်မှာရှိနေတဲ့ အိတ်
31. Sebaceous cysts အရေပြား
32. Tarlov cysts (Meningeal or Perineural cysts) ဦးနှောက်မြှေး
33. Thyroid cysts (သိုင်းရွိုက်) လည်ပင်းကြီး
34. Vaginal Cysts, Polyps, Warts ဗဂျိုင်းနားမှာ အပိုအဆာတွေ ဖြစ်တာ
၁။ ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင် ကျွန်မ အသက်၊ ၄၆ နှစ်ပါ။ မန္တလေး မြို့ကပါ။ မျက်နှာမှာ တင်းတိတ်ကျလာတာ ပိုပိုများ လာပါတယ်ဆရာ။ သူများပြောတဲ့လိမ်းဆေးများ ကြော်ငြာလိမ်းဆေးများ လိမ်းတာ ပိုများလာပါတယ်။ အရင်တခါ ဆရာ့အား မေးမြန်းဘူးပါတယ်။ ဆရာမှ Melasma တင်းတိတ် ဘလော့မှာဖတ်ရန် ညွှန်ကြား၍ ဖတ်သော်လည်း အင်္ဂလိပ်စာနှင့်ဆေးများကို သေချာစွာဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သို့ပါ၍ လိမ်းဆေး သောက်ဆေးများကို ညွှန်ကြား ကူညီပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်။
၂။ ဆရာရှင့်ကျမ အသက် ၃၅ နှစ်ပါ။ ကျမ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်၊ သားဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားချိန်မှာ ကျမရဲ့ ပါးနှစ်ဖက်မှာ တင်းတိတ် ထွက်လာတာ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပါဘဲ။ ကျမကရွှေပြည်နန်းသနပ်ခါး တမျိုးဘဲ အမြဲလိမ်းပါတယ်။ ကျန်တာဘာဆိုဘာမှ မလိမ်းပါဘူး။ တခြားတခုခုကိုလိမ်းမိရင်လည်း အဖုလေးတွေထွက်လာတတ်လို့မလိမ်းပါဘူး။ ယခု လုပ်ငန်းခွင်သွားရတော့ ပါးပေါ်ကတင်းတိတ်တွေက ပိုမဲပြီးပေါ်လာပါတယ်။ ဘယ်လိုပျောက်အောင်လုပ်သင့်ပါသလဲဆရာ။
အရေပြားမှာ အရောင်ရင့် အစက်-အကွက်တွေ ဖြစ်လာတာကို Hyperpigmentation လို့ခေါ်တယ်။ ဒီလို ဖြစ်တာတွေ ထဲမှာ မှဲ့ခြောက်၊ တင်းတိပ်စသဖြင့်ပါတယ်။ အရုပ်ဆိုးအကျဉ်းတန်တာကလွဲရင် ဒုက္ခမပေးပါ။ ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ အရောင်က လိုတာထက် ပိုရင့်နေတာပါ။ ဘာမဆို ပိုလဲမကောင်း၊ လိုလဲမကောင်းတာချည်းဘဲ။
Melanin (မယ်လနင်) အကြောင်းမပြောဘဲ ဆက်ရေးလို့ မရပါ။ အရေပြားကို အရောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ ဆိုးဆေးပါ။ အသားညို၊ အသားမဲသူတွေမှာ သူကများနေတယ်။ အသားမဖြူသူတွေက ပိုကံကောင်းကြတယ်။ (မယ်လနင်) ကနေ နေရောင်ထဲပါတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ရန်က အကာကွယ်ပေးနေတယ်။ အဖြူမတွေ Tan ဖြစ်အောင် အဝတ်အစားတွေ ချွတ်နိုင်သလောက် ချွတ်ပြီး နေရောင်ခြည်ချိုးနေကြရတယ် မဟုတ်လား။ (မယ်လနင်) က ဗက်တီးရီးယားနဲ့ မှိုပိုးကနေ အကာကွယ်တယ်။ အပူဒဏ်၊ ဓါတုဒဏ်တွေကနေလဲ ကာကွယ်မှုပေးတာမို့ Melanin ဟာ ခုခံမှုစနစ်ရဲ့ အပြင်ဆုံးခံတပ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ သူက ဆံပင်မှာလဲ ရှိတယ်။ (အဒြီနယ်-ဂလင်း) နဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာပါ ရှိတယ်။ Melanin မရှိသူတွေကို Albinism လူဖြူလို့ ခေါ်တယ်။ တကိုယ်လုံး အသားအရေ၊ ဆံပင်၊ မျက်လုံး၊ အားလုံး ဖြူဖွေးနေတဲ့သူတွေ။ မျိုးဗီဇ ပြဿနာတခုပါ။ Melasma (Chloasma faciei) ဆိုတာကို တင်းတိပ်လို့ ပြောရမယ်။
တရားခံနံပါတ်တစ်က နေရောင်ပါ။ UV rays ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်က ဖြစ်စေတာပါ။ ရောင်ရမ်းတာက နောက်အကြောင်းတရား။ ထိခိုက်၊ အနာဖြစ်၊ အပူလောင်၊ ဝက်ခြံပေါက်၊ နှင်းခူနာဖြစ်၊ Psoriasis လို အရေပြားနာ စတာတွေကြောင့်က တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘဲ အနာကျက်ဘို့လုပ်ရင်း အညိုကွက်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ တခြားလဲ ရှိနိုင်သေးပါတယ်။ Addison’s disease ဆိုတဲ့ Adrenal gland (အဒရီနယ်) အိတ် အားနည်းတဲ့ရောဂါမှာ ဖြစ်တယ်။ လည်ပင်ကြီးရောဂါရှိသူတွေမှာ ၄ ဆ ပို ဖြစ်ကြတယ်။
ယောက်ျားက ပိုပြီးနေရောင်နဲ့ထိရတာများပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ သိသိသာသာ ၉ဝ% အဖြစ်များတယ်။ ဟော်မုန်းက အဓိကကျလို့ပါ။ ယောက်ျား-မိန်းမမှာ ဟော်မုန်းတွေက ရှိကြပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အပြောင်းအလဲက ပလူးပလဲဆိုရမလို လအစ၊ လအလယ်၊ လအဆုံး၊ အမြဲပြောင်းလဲနေတယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေက ဟော်မုန်းတွေ ချည်းဘဲ။ အပျိုဘော် မဝင်သေးရင် အဖြစ်နည်းတယ်။ အိမ်ထောင်ကျ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ ကလေးဖွါး၊ သွေးဆုံး၊ ဟော်မုန်းတွေ ပြောင်းလဲမဆုံးပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကို မျက်နှာမြင်တာနဲ့ (မွေးတာ မဟုတ်သေးပါ) သိသာတယ်။ ကိုယ်ဝန်နဲ့အတူ အဲလိုဖြစ်လာတာကို Chloasma လို့ ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တို့ရဲ့ မျက်နှာဖုံးလို့ ခေါ်ကြတယ်။ အလှအပ အသုံးအဆောင်တွေကလဲ အဆင်မသင့်ရင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ မျိုးရိုးကိုလဲ ၃ဝ% အပြစ်ရှာနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီရောဂါဟုတ်-မဟုတ် Wood lamp နဲ့ စမ်းရင် သိတယ်။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် ပျောက်ဘို့ ခက်ပါတယ်။ ဖြစ်လာတာလဲ ဖြေးဖြေး၊ ပျောက်ဘို့ရာလဲနှေးနှေး။ ကြာပါလိမ့်မယ်။ မပျောက်တော့တာ ရှိသလို ပြန်ပေါ်တာရှိမယ်။ ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ဖြစ်သူတွေ မွေးအပြီးမှာ သက်သာပျောက်ကင်း သွားတတ်ပါတယ်။ တားဆေးကြောင့်၊ ဟော်မုန်းဆေးကြောင့် ဖြစ်ရသူတွေလဲ အဲလိုပါဘဲ။
တင်းတိပ်ကိုကုသဘို့ အများဆုံးသုံးတာက လိမ်းဆေးနည်း၊ ဓါတုဆေးနဲ့ အပေါ်ယံခွာထုတ်နည်း၊ အနုနည်းနဲ့ အပေါ်ယံခွါနည်း နဲ့ လေဆာနည်းတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ လေဆာဟာ ဦးစားပေးနည်း မဟုတ်ပါ။
• Azelaic acid (Azelex, Finacea) ဖြစ်တယ်။ 15%-20% ကိုသုံးတယ်။ ယားနာ၊ နီတာ၊ အပေါ်ရေကွာတာ လောက်သာ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးရှိတယ်။ ၁၄-၃ဝ ရက်အကြာမှာ သက်သာလာမယ်။
• Cryotherapy, Medium-depth chemical peels, Fraxel Laser treatment တွေနဲ့ကုတာ ဘာဖြစ်လာမလဲ အမှန်းရ မလွယ်လှပါ။ ဆရာဝန်တော်ဘို့လိုတယ်။ လူနာလဲ ကံကောင်းဘို့လိုတယ်။
• Fluocinolone Acetonide ဆေးကတော့ (ကော်တီကိုစတီရွိုက်) ဖြစ်တယ်။ အရောင်လျှောစေမယ်၊ ယားတာ သက်သာမယ်၊ သွေးကြောတွေကျဉ်းစေမယ်။ ဆေးတွေနဲ့မတည့်သူ၊ မျက်စိမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်နေသူ၊ herpes simplex keratitis, vaccinia, and varicella, mycobacterial infections မျက်စိရောဂါတွေကို မသုံးရပါ။ တနေ့မှာ ၂-၄ ကြိမ် လိမ်းပါ။ ၃-၆ လအထိကြာနိုင်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တပတ် ၃ ကြိမ်သာလိမ်းခိုင်းတယ်။ မျက်နှာ၊ ပေါင်ခြံ၊ ချိုင်းနေရာတွေဆိုရင် ဆရာဝန်ကမညွှန်ဘဲ မလိမ်းသင့်ပါ။ မျက်စိထဲမဝင်စေရ။ ဆေးအထူကြီး မလိမ်းရ။ လိုအပ်ရင် ဆေးလိမ်းပြီး အပေါ်ကဖုံးထားရမယ်။
• Hydroquinone (HQ) 2-4% ကို အများသဘောတူထားတယ်။ (Alphaquin HP, Alustra, Eldopaque, Eldopaque Forte, Eldoquin, Eldoquin Forte, Esoterica, Esoterica Sensitive Skin, Glyquin, Glyquin-XM, Lustra, Melanex, Melanol, Melpaque HP, Melquin HP, Melquin-3, Nuquin HP, Solaquin, Solaquin Forte, Viquin Forte) နာမယ်တွေနဲ့လာတယ်။ ဂရုတစိုက်တော့ လိမ်းရပါမယ်။ အရေပြားချွတ်ဆေးလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဆေးဖြတ်လိုက်ရင် နဂိုသဘောပြန်ဖြစ်ပါတယ်။
• Kligman formula ဆိုတာ (Fluocinolone acetonide 0.01% + Hydroquinone 8% + Tretinoin 0.1%) ဖြစ်တယ်။ (SPF) နေ့စဉ် နေရောင်ကာကွယ်နည်းဖြစ်တယ်။ ဖြစ်နေတဲ့နေရာကို Zinc oxide နဲ့ Titanium dioxide ဆေးတွေနဲ့ဖုံးပေးပြီး နေရောင်ထဲက UV rays (UV-A and UV-B) ကို ကာကွယ်ပေးတယ်။
• Tretinoin (Avita, Retin-A) 0.025%, 0.05% 0.1% cream; 0.01%, 0.025%, 0.1% gel; 0.05% solution ခရင်မ်၊ ဂျဲလ်၊ အရည်။ ဗီတာမင် (အေ) ပါတယ်။ နေလောင်လို့ အရေပြားပျက်စီးတာကို သက်သာစေမယ်။ ဝက်ခြံအတွက်လဲ သုံးတယ်။ အရေးအကြောင်းတွေလဲ သက်သာစေတယ်။ အရေပြား အနေရခက်ပြီး ကွာကျတတ်တယ်။
• Tri-Luma ဆေး ၃ မျိုးတွဲဆိုတာ (Fluocinolone acetonide 0.01% + Hydroquinone 4% + Tretinoin 0.05%) ၃ မျိုး ရောထားတာဖြစ်တယ်။ ၆-၈ ပါတ်အထိသုံးရတာများတယ်။ ဆရာဝန်က မခိုင်းဘဲ ဒိထက်တော့ ပိုမသုံးသင့်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ နို့တိုက်ချိန်မှာ မသုံးသင့်ပါ။ Triple Combination Cream (Hydroquinone 4%, Tretinoin 0.05%, and fluocinolone acetonide 0.01%) ၃ မျိုးတွဲလိမ်းဆေး တနေ့ ၂ ကြိမ်လိမ်းရတယ်။ FDA ကနေ လက်ခံတားတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ ရလဒ် အကောင်းချည်း မဟုတ်တာ တွေ့ရတယ်။ တချို့မှာ နည်းနည်းကောင်းလာတယ်။ တချို့ မထူးတာလဲ ရှိတယ်။ ကုသမှုခံယူနေရင်း ဆိုးလာတတ်တယ်။ သိသာတဲ့ရလဒ် မြင်လာအောင် ကြိမ်ဖန် များစွာလုပ်ဘို့ လိုနိုင်တယ်။ ဆေးကုနေရင်း ပြန်ဖြစ်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ လေဆာနည်း သုံးသင့်တယ်။ ဆက်မလုပ်လို့ ပိုဆိုးစေမယ်လို့ မယူဆပါ။
Chemical peels (Chemical exfoliation) ဓါတုဆေးနဲ့ အပေါ်ယံခွာထုတ်နည်း
30%-70% Glycolic acid peels ကိုသုံးတာများတယ်။ တချို့က 10% Glycolic acid + 2% HQ တွေရောသုံးတယ်။ Microdermabrasion နည်းကတော့ Vacuum suction လေဟာနယ်စုပ်နည်းနဲ့ Diamond chips ဖြစ်ဖြစ် Aluminum oxide crystals ဖြစ်ဖြစ်သုံးပြီး ခြစ်ထုတ်ပေးတယ်။
2% Hydroquinone (HQ) creams ကိုအများဆုံးသုံးတယ်။ ဆေးနာမည်တွေက Esoterica နဲ့ Porcelana ဖြစ်တယ်။ Obagi Clear, Glyquin, Tri-Luma နဲ့ Solaquin တွေက 4% creams ဖြစ်တယ်။ အရောင်ရင့်တဲ့ နေရာကို တနေ့ ၂ ကြိမ် လိမ်းရတယ်။ ညနေခင်းမှာ ဆေးပေါ်ကနေ Sunscreen လိမ်းသင့်တယ်။ ဒီဆေးနည်းက Epidermal type အမျိုးအစား ပိုကောင်းတယ်။
နောက်လိမ်းဆေး တမျိုးကတော့ Hydroquinone, Azelaic acid, and Retinoic acid (Tretinoin) တွေ ရောထားတာ ဖြစ်တယ်။ (2% Kojic acid inagel containing 10% Glycolic acid and 2% Hydroquinone) ၃ မျိုး ရောထားတာလဲရှိတယ်။
ဆိုးတဲ့ တင်းတိပ်ကို HQ % များများနဲ့ Tretinoin + Corticosteroids + Glycolic acid တွေရောထားတဲ့ဆေးမျိုး သုံးနိုင်တယ်။
Fluocinolone acetonide/Hydroquinone/Tretinoin ခေါ်တဲ့ဆေး ၃ မျိုးတွဲလိမ်းဆေးကို Tri-Luma, Triglow နာမည်တွေနဲ့လာတယ်။ Melasma တင်းတိတ်အတွက်သုံးတယ်။
အသက် ၂ဝ-၅ဝ အရွယ် အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။ အရောင်ညိုနေမယ်။ ခပ်ပြာပြာ၊ မီးခိုးရောင်လဲ ရှိတယ်။ မျက်နှာ အလည်ခေါင်၊ ပါးရိုးနဲ့ မေးရိုးတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။ နေရာင်၊ မျိုးရိုး၊ ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် ဖြစ်စေတယ်။ Hydroquinone ဆေးကို အများဆုံး သုံးတယ်။ နေရောင်ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်တာ ကောင်းစေတယ်။ သူ့အလိုလိုပျောက်နိုင်တာလဲ ရှိတာသတိပြုပါ။ Sunscreen လိမ်း၊ နေရောင်မထိအောင် ရှောင်နေတာနဲ့ ပြန်ကောင်းတာ ရှိတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး ကလေးမွေးတာနဲ့ ပျောက်သွားတယ်။ တချို့မှာ ကိုယ်ဝန်တာဆေး ဖြတ်တာနဲ့ ပြန်ကောင်းတယ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်၊ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွေမှာ တင်းတိပ်ကို ဆေးမကုဘဲနေသင့်တယ်။ ဆေးကုနည်းတွေက အရာရာကို အာမမခံနိုင်ပါ။ ကုသနေရင်း ပိုဆိုးလာတာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
• နေရောင်ကိုတသက်လုံးကာကွယ်ပါ။ ထီးနဲ့ မျက်နှာတခုလုံးနေလုံတဲ့ဦးထုပ်။
• SPF 50+ sunscreen နေရာင်ကာအပြင်းစားကို နေ့စဉ်သုံးပါ။ နွေနေရောင်နဲ့တွေ့ရင် ၂ နာရီတခါလိမ်းပါ။ နေရောင်ကာပါတဲ့မိတ်ကပ်လည်းသုံးနိုင်တယ်။
• မျက်နှာသန့်ဆေး အပျော့စားသုံးပါ။
• အရေပြားကခြောက်တဲ့အမျိုးအစားဆိုရင် light moisturizer အပျော့စားသုံးပါ။
Topical therapy လိမ်းဆေးများ
• Tyrosinase inhibitors ဆေးအမျိုးအစားကအဓိကကျတယ်။
• Hydroquinone 2–4% cream or lotion ညအချိန်လိမ်းပါ။ ၂-၄ လ။ ၂၅% မှာ အရေပြားတာဖြစ်လာတတ်တယ်။ အပြင်းစားကို တာရှည်မသုံးသင့်ပါ။
• Azelaic acid cream, lotion or gel ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရင် တနေ့ ၂ ကြိမ်လိမ်းပါ။
• Kojic acid or kojic acid dipalmitate ကိုလည်းသုံးနိုင်တယ်။
• Ascorbic acid (vitamin C) ဗီတာမင်စီလည်းသောက်ပါ။
• Methimazole (antithyroid drug) cream ကိုလည်းသုံးနိုင်တယ်။
• Topical corticosteroids such as hydrocortisone ဆေးလိမ်းနိုင်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသတိထားရမယ်။
• Soybean extract ပဲပုပ်ကနေထုတ်တဲ့ဆေးလည်းသုံးနိုင်တယ်။
• Tranexamic acid cream လိမ်းနိုင်တယ်။
• Topical alpha hydroxyacids လိမ်းနိုင်တယ်။
• Topical retinoids (tretinoin) လိမ်းနိုင်တယ်။
• Salicylic acid လိမ်းနိုင်တယ်။
• (Hydroquinone + tretinoin + topical steroid) ဆေး ၃ မျိုးရောထားတာက အထိရောက်ဆုံးဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ဆေးပညာစာတွေမှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးတွေပါတယ်။ ဆောရီး။ မဖတ်လိုသူတွေက ကျော်ဖတ်လို့ ရပါတယ်။ ရောဂါအမည်တွေနဲ့ ဆေးအမည်တွေကို မူရင်းစာလုံးနဲ့သာရေးမှ မှန်ကန်မယ်။ အဲတာတောင် စာလုံးလေး တလုံးလွဲရင် မတူတော့ပါ။ ကျွန်တော်က ဆေးပညာစာတွေသာရေးပါတယ်။ မမြင်ရ မစမ်းရသူကို အဝေးကနေ ဆေးကုသလို မလုပ်အပ်ပါ။
Kidney cysts ကျောက်ကပ်ရေအိတ်
၁။ မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင် ကျမက ကျောက်ကပ်ရေအိတ်တည်လို့ မေးမြန်းဖူးတဲ့လူနာပါရှင့်။ ဆရာရဲ့ ကျောက်ကပ်ရေအိတ် ဆောင်းပါးကို လည်း ဖတ်ရပါတယ်ရှင့်။ ဆရာကိုလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျမတို့ ကျောက်ကပ်ရေအိတ် လူနာတွေအတွက် ဆောင်ပါးတွေ တော်တော်များများ ရှာရခက်ပါတယ်ရှင့်။ ကျောက်ကပ်ရေအိတ်လူနာတွေဟာ ကျောက်ကပ်နာတာရှည် ဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။ အမျိုးသမီးဆိုရင် ကလေးယူရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါသလား။ ကျောက်ကပ်ရေအိတ်လူနာဟာ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်တဲ့ လူနာနဲ့တူနိုင်ပါသလား။ ကျောက်ကပ်ရေအိတ်ဟာ အရွယ်မကြီးရင် ဆေးစားပေးခြင်းဖြင့် အမြစ်ပြတ်နိုင်ပါသလား စသဖြင့်။ ကျောက်ကပ်ရေအိတ်သမားတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်သော အခြေနေများကို ဆောင်းပါးရေးသားပေးစေလိုပါတယ်ဆရာ။ အားကိုးစွာဖြင့် ဆေးကုသိုလ်အကျိုးပြုသောဆရာ ကျမ္မာပါစေချမ်းသာပါစေ။
ကျောက်ကပ်ရေအိတ်နဲ့ ကျောက်တည်တာ မတူလို့သာ အမည်တမျိုးစီပေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်အတွက် တားမြစ်ချက် လုပ်တော့မထားပါ။ လူတဦးချင်းစီကိုကြည့်ရမယ်။ ရောဂါဘယ်လိုပျောက်မလဲ စာထဲမှာပါထားတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်နိုင်တာတွေလည်း စာထဲမှာပါရှိ။
၂။ ကျမ အခု ထွာလ်ဆောင်းရိုက်ထားတဲ့ပုံပါ။ ကျောက်ကပ်ရေအိတ်တည် တာလို့ပြောပါတယ်။ စိုးရိမ်ရပါသလားဆရာ။ ကျမအသက်က 32 ပါ။ ဓမ္မတာမှန်ပါတယ်ဆရာ။ ဗိုက်တွေတော့ ပြည့်တင်းနေသလို အမြဲခံစားရပါတယ်။
အသက်-ကျား-မ-အိမ်ထောင်ရေး အရင်ဆုံးမရေးတာတိုင်းကို ၂ ခါထပ်ဖတ်ရတယ်။ အချိန် ၂ ဆကုန်နေရတယ်။ မေးတဲ့သူ ရာသီ မသိ။ အိမ်ထောင်ရေး စတာ မသိပါ။ ဖြေရန်မလိုတော့ပါ။
၃။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျမ အသက် ၃၄နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်မရှိ။ ရာသီတလထဲတွင်နှစ်ခါ ရက်ပိုင်းနှစ်ဆယ်လောက်သာ ခြားလာပြီး မေ (၁၆) တွင် ဆယ်ရက်တကြိမ်လာနေ၍ OG နှင့်ပြခဲ့ပါသည်။ OG မှ သွေးဆေးမသောက်ရန် မှာကြားပြီး Vizicon ဆေး ပြီး Ultrasound ရိုက်ပြီး ပြန်လာပြခိုင်းပါသည်။ အဖြေမှာ ညာဘက်ကျောက်ကပ်တွင် အမှုန်အနည်းငယ်ရှိ၍ ဘယ်ဘက် ကျောက်ကပ်တွင် ရေအိတ်သုံးလက်မခန့်ရှိနေလို့ ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ်ဆရာထံ ထပ်လွှဲပါသည်။ ထိုဆရာမှ EvoFix 400mg ပေးပြီး တပတ်စောင့်ကြည့် ပြီး အခြေအနေမကောင်းရင် ထုံဆေးနဲ့ ဖောက်ထုတ်မယ် ပြောပါသည်။ ဖောက်မထုတ်ပဲ သောက်ဆေးအမျိုးအစားအမည်ရယ်၊ အကယ်၍ မဖောက်ထုတ်ပဲ ဒီတိုင်းဆက်ထားမယ်ဆို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားရမှုမျိုးတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်ပါလဲ။ ကလေးမရနိုင်တာ တွေထိပါရှိလာနိုင်မှာလား။ ရေအိတ်ကြောင့် ရာသီခဏခဏလာနေရခြင်းလား။ ရှေ့ဆက်လုပ်သင့်တာ ပြုမှုနေထိုင်သင့်တာတွေကို ကျေးဇူးပြု၍ညွှန်ကြားပြီးရှင်းပြပေးပါဆရာ။ Ultrasound Result ကို ပုံနှင့်တကွ ပူးတွဲပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ကျောက်ကပ်ရေအိတ်ဟာ ရှားရှားပါးပါး အရေးကြီးတဲ့မူမမှန်ရောဂါနဲ့ တွဲရှိနေနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့် ဒုက္ခမပေးပါ။ တဖက်တည်းရော နှစ်ဖက်လုံးမှာပါရှိနိုင်တယ်။ ဘာလို့ဖြစ်သလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိပါ။
Polycystic kidney disease ခေါ်အရည်အိတ်လေးတွေအများကြီးရှိတာနဲ့ မတူပါ။ (ပေါ်လီဆစ်စတစ်) ကျောက်ကပ် ရောဂါဆိုတာ မျိုးဗီဇရောဂါတခု ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရိုးရေအိတ်က တခြားအကြောင်းတခုခုအတွက် စမ်းသပ်ရင်း တွေ့တာများတယ်။ ခံစားနေရတာလည်းမရှိတာများတယ်။ ခံစားရတာရှိတယ်ဆိုရင် ခါးနောက်ကထုံပြင်းပြင်းနာမယ်။ ဖျားမယ်။ ဗိုက်ပါအောင့်မယ်။
ကံမကောင်းရင် ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်တာတွေတော့ရှိတယ်။ ရေအိတ်ကိုပိုးဝင်လို့ ကိုယ်ပူမယ်။ နာမယ်။ ပေါက်ထွက်လို့ ဆီးလမ်းကြောင်းကို ဆို့နေနိုင်တယ်။
ခံစားနေရတာရှိမှသာ ကုသဘို့လိုတယ်။ ဖေါက်ပြီးအရည်ထုတ်ပေးနည်းလုပ်တယ်။ အထဲကို (အယ်လ်ကိုဟော) ထိုးထည့်ပေးမယ်။ ကျောက်ကပ်အရည်အိတ်ကကြီးနေရင် ခွဲထုတ်ပေးရတာလည်းရှိတယ်။ ကင်မရာပါကိရိယာသုံး ခွဲနည်းလည်း ရှိတယ်။
အဖြူရောင်အစာတွေကို လျှော့စားပါလို့ ပြောလိုက်ရင် အခွံချွတ်ထားတဲ့ ဆန်တွေ၊ ဂျုံတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့အစာတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ အဖြူရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အစေ့အဆန်နဲ့ အခွံမာအသီးတွေမှာ ရောဂါကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း (anti-oxidants)တွေ များစွာမပါဝင်ပေမယ့် သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ခြေနဲ့ အခြားရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေရှိကြောင်း အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ခွက်တစ်ဝက်စာ မုန်လာဥမှာ ၁၈ ကယ်လိုရီသာ ပါဝင်ပေမယ့် ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ Glucosinolates ဒြပ်ပေါင်းတွေ များစွာပါဝင်ပါတယ်။
ချက်ပြီးသား ပန်းဂေါ်ဖီတစ်ခွက်စာမှာ အရိုးသန်စွမ်းဖို့လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် K ဟာ သင်ရဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက် ပမာဏရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပါဝင်ပါတယ်။
Quercetin တွေများစွာပါဝင်တဲ့အတွက် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
ခွက်တစ်ဝက်စာ မုန်လာဥဖြူမှာ ကိုးကယ်လိုရီသာပါဝင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီ များစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ခုခံအားစနစ် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
သွေးဖိအားလျော့ကျစေနိုင်တဲ့အပြင် ကိုလက်စထရောအဆင့်လည်း လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းလည်း ရှိပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင် C များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ မတ်ပဲ တစ်ခွက်စာမှာ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အမျှင်ဓာတ်လိုအပ်တဲ့ ပမာဏရဲ့ ထက်ဝက်ခန့် ပါဝင်တဲ့အပြင် အသားဓာတ် ၁၄ ဂရမ် ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီဆေးနည်းကတော့ အင်မတန်ရိုးရှင်းလွယ်ပြီး တကယ်ထိရောက်စေမည့် သဘာဝဆေးနည်းကောင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့ပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ ကိုရန်နိုင်စိုးမှ အများသိအောင် ပြန်လည်ရေးသားမျှဝေပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးရုံမှာ အာထရာဆောင်းရိုက်ပြီး သည်းခြေမှာ ကျောက်တည်နေသည့်အတွက် မခွဲစိပ်ခင်မှာ သောက်ဆေးနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ ကုကြည့်တယ်။ မပျောက်ဘူး။ ကျောကတည်ပျောက်ဆေးနည်းတွေကို စမ်းကြည့်တယ်။ မပျောက်ပြန်ဘူး။ လက်မလျှော့ပဲ နောက်ထပ်ကြိုးစားကြည့်ရာ ဒီနောက်ဆုံးနည်းနဲ့ သည်းခြေမှကျောက်ဟာ လုံးဝပျောက်သွားလို့ ခွဲစိပ်စရာမလိုတော့ပဲ အကောင်းပကတိအတိုင်း ပြန်ဖြစ်လာပါတယ်။
ဆေးနည်းကတော့ အခက်ကြီးမဟုတ်ပဲ အရမ်းကို လွယ်ကူသက်သာလှပါတယ်။ စောင်းလျားသီးနဲ့ ငါးပြေမကို အတူတူရောပြီး ချက်စားတာပါပဲ။ ဘယ်လောက်ထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအသာတော့မပါပေမယ့် ဟင်းချက်သလိုပဲ ချက်စားနိုင်ပါတယ်။ စောင်းလျားသီးကိုတော့ အချဉ်ကို ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄င်းဆေးနည်းကို ပထမတစ်ခါချက်စားပြီးကတည်းက သည်းခြေမှကျောက်တည်ရောဂါဟာ သိသိသာသာ သက်သာလာပါတယ်။ ၄ ခါလောက်ချက်စားပြီး ဓါတ်မှန်သွားရိုက်ကြည့်ရာမှာတော့ ကျောက်လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ ခွဲစိပ်စရာလည်းမလိုတော့ပဲ အံ့သြစရာကောင်းအောင် ပျောက်သွားပါတော့တယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကိုရန်နိုင်စိုးလိုပဲ သည်းခြေမှာကျောက်တည်ပြီး ဆေးရုံဆေးခန်းနဲ့အလှမ်းဝေးသူများ၊ ခွဲစိပ်ရန်အခက်အခဲရှိသူများအနေနဲ့ ဒီသဘာဝဆေးနည်းနဲ့ ကုသနိုင်ကြစေရန် ပြန်လည်ရေးသားမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သည်းခြေအပြင် ဆီးကျောက်တည်ရောဂါအတွက်လည်း ပျောက်ကင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းများကလည်း လူတို့စားသုံးနေကျအစားအစာဖြစ်လို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းမရှိပါဘူး။ ကဲ မိတ်ဆွေတို့လည်း အနာနဲ့ဆေးတည့်ပြီး ရောဂါဝေဒနာများ အမြန်သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ကြပါစေနော်။
ဒီအချိန်မှာ အရင်ကထုံးစံအတိုင်း မျက်နှာကိုအရင်သစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်
ရေနဲ့ထိပြီးအေးသွားတဲ့ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကို တစ်ကိုယ်လုံးက အပူတွေ
အကုန်ပြေးလာကြပါတယ် ၊ ဒါကြောင့်မျက်စိကိုတစ်ကိုယ်လုံးက အပူခိုး ၊
အပူငွေ့တွေလာရိုက်တော့တာပေါ့ ။ ။ ။
သေချာသိချင်ရင် မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ မှန်ထောင်ကြည့်လိုက်ပါ ၊
မျက်လုံးနှစ်လုံးစလုံး " ရဲ " နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ အဲ့ဒီလိုအပူခိုးတွေ
ရိုက်ပါများလာတဲ့အခါ " ဒီမျက်စိကမှုန်ပြီး အားနည်းသွားတာပေါ့ " ။ ။ ။
ဒါကြောင့်အပူခိုးတွေ မျက်စိဆီကိုမသွားဘဲ အောက်ရောက်သွားအောင်
ခြေထောက်ကိုအရင်ရေလောင်းရတာပေါ့ ၊ ဒူးကနေရေလောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလည်း
ချက်ချင်းမျက်နှာမသစ်ရသေးဘူး ။ ချိုင်းကြားနှစ်ဖက်မှာ ကပ်ကျန်နေတဲ့ အပူခိုးတွေ
ထွက်သွားအောင် မတ်တတ်ရပ်ပြီး လက်နှစ်ဘက်ကို ခေါင်းပေါ်မြှောက်တင်လိုက်
အောက်ချလိုက် နဲ့ အနည်းဆုံး အကြိမ် ၂၀ လောက်လုပ်ပေးရမယ် ။ ။ ။
အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါ တက်နေတဲ့ ဇက်ကြောတွေလျှော့သွားအောင် ခေါင်းကို
နောက်ကျောဘက်ရောက်နိုင်သလောက် လှန်ချရမယ် ၊ ရှေ့ကိုလည်း
ရသလောက် ငုံ့ရမယ် ။ ဒါကလည်းအကြီမ် ၂၀ လောက်ပေါ့ ၊ ပြီးရင် ခေါင်းကို
ဘယ်ညာ အခါ ၂၀ လောက်လှည့်ပေးရမယ် ။ ။ ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်း သုံးခု ပြီးတာနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ အပူခိုးတွေ
ခြေထောက်ကတဆင့် ထွက်နေတာ ကုန်သွားပါပြီ ။ သေချာသိချင်ရင်
" ရေတစ်စက်မှမရှိတော့ဘဲ ခြောက်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ် " ။
အဲဒီကျတော့မှ မျက်နှာကို ဆပ်ပြာနဲ့ သေချာသစ်ရမယ် ၊ သွားမတိုက်ရသေးဘူး ။
ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားရမယ် ။ မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့သုတ်ပေတော့ ။
ဒီအချိန်မှာ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ မွှေးညှင်းပေါက်တွေ အကုန်ပွင့်သွားတာပေါ့ ၊
အဲ့ဒီကျတော့မှ သွားတိုက်ရမယ် ၊ သွားတိုက်ရင်းနဲ့ သွားကြိုသွားကြားမှာရှိတဲ့
အခိုးအငွေ့တွေဟာ " မျက်နှာကမွှေးညှင်းပေါက်များမှတဆင့် ထွက်ကုန်မယ်လေ" ။
ဒီနည်းကတော့" အပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သွားကိုက်ရောဂါ " ကို ကြိုတင်ကာကွယ်နည်းပါ ။
နောက်ပြီးဖြစ်နိုင်ရင် နေ့ဘက်ကို ဦးစားပေးပြီး စာကြည့်သင့်တယ် ၊
ညဘက်ကိုနည်းနည်း ပဲကြည့်စေချင်တယ် ။
ဒီနည်းဖြင့် မျက်စိမှုန်နေသူများ ပြန်အားကောင်းနိုင်ပါတယ် ။
မျက်စိအားကောင်းသော သူများပင်လျှင် ဒီနည်းကို အမြဲတစေပြုလုပ်မည်ဆိုပါက
မျက်မှန်တတ်ရမည့် အဆင့်သို့ မရောက်နိုင်တော့ပါ
WHO H1 N1 Update မြန်မာ့တုပ်ကွေး အပ်ဒိတ်
Seasonal Influenza A (H1N1) pdm09 ရာသီတုပ်ကွေး အေ H1N1 ဖြစ်သည်။ ၂၆-၇-၂ဝ၁၇ နေ့အထိ စုစုပေါင်း ၂ဝ တွေ့ရှိ။ ၃ ယောက်သေဆုံးပြီး။ WHO နှင့် မြန်မာ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များ ပူးပေါင်းရွက်ဆောင်နေသည်။
ရက်တို ချက်ချင်းဖြစ်တုပ်ကွေးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ လူတဦးမှ တဦးသို့ လျင်မြန်စွာကူးစက်နိုင်သည်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်သည်။
• အမှုံအမွှားလေးများကတဆင့်ကူးစက်သည်။ လေကတဆင့်ကူးစက်သည့်ရောဂါ မဟုတ်။ ရောဂါဆိုးဝါးစေသည့် အမျိုးအစားမဟုတ်။
• လူနာတဦးမှ ချောင်းဆိုး နှာချေသည့်ခါ ထွက်လာသည့် အမှုံအမွှားလေးကို ရှူမိသူတဦးအား ကူးစက်နိုင်သည်။ ပိုးပါနေသည့်လက်ကတဆင့်လည်း ကူးစက်နိုင်သည်။
• ထို့ကြောင့် လက်ကို ဆပ်ပြာနှင့် ရေဖြင့် မကြာခဏဆေးကြောပါ။ လူနာကထွက်သည့် အမှုံအမွှားများ ရှိနေနိုင်သည့် ကြမ်းပြင် မျက်နှာပြင်များကို ဆေးကြောသန့်ရှင်းပေးပါ။
• မိမိထံကူးစက်မလာစေရန် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းကို ဖုံးအုပ်ထားပါ။ အထူးသဖြင့် ချောင်းဆိုးနှာချေလျှင် ဖုံးအုပ် ကာကွယ်ပါ။ ပုံတွင်ပြထားသည့်နမူနာကိုကြည့်ပါ။ တံတောင်ဆစ်ထဲသို့ ချောင်းဆိုးခြင်းဟု ခေါ်သည်။ တစ်ရှူးရှိလျှင် အသုံးပြုပါ။ တစ်ရှူးကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ။ လက်ကို ထပ်ဆေးပါ။
• ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် ထိရောက်သောကာကွယ်နည်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အသက် ၆ လမှ ၅၉ လအထိ ကလေးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ လူနာများနှင့် ထိတွေ့နေကြရသူများ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ နာတာရှည်ရောဂါရှိသူများ။
ကာကွယ်ဆေးဟူသည် ဖြစ်နေသည့်ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားနှင့် မျိုးကွဲအတိအကျဖြစ်မှသာ ထိရောက်သည်။ အသေးစိတ်ကို www.who.int/wer/2012/wer8747/en/ မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဗိုင်းရပ်စ်များသည် အမျိုးအစာကွဲလွဲမှု ဖြစ်လာတတ်သည်။ လူအများက အဆိုပါ အမျိုးအစားသစ်ကို ခံနိုင်စွမ်းမရှိလျှင် လူအများစုကိုဖြစ်စေသည့် ကပ်ရောဂါဖြစ်လာနိုင်သည်။
WHO ထုတ်ပြန်ထားချက်ကို အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲလွဲချက်ရှိရင် ကျွန်တော့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုပို့စ်ထဲမှာ မပါတဲ့ နှာခေါင်းစည်းအမျိုးအစားတွေ ကာကွယ်ဆေးအမည်တွေ မမေးစေလိုပါ။ အားလုံး ရေးတင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်ဆေးနည်းနဲ့ အရက်ဆေးနည်းတွေကိုလည်း မမေးကြပါရန်။
Lumps or Bumps အလုံးအကျိတ်
ကျွန်တော့်အသက် ၁၉ ပါ။ ယောကျာ်းလေးပါ။ အိမ်ထောင်မရှိပါ။ ရန်ကုန်ကပါဆရာ။ တင်ပါး ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ အဆီကျိတ် ဖြစ်နေလို့ပါဆရာ။ ဖြစ်တာ ၂နှစ်လောက် ကြာပါပြီ။ ဆရာဝန်က ကင်ဆာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါပေမယ့် ခွဲမှ အဲဒီ အလုံးက ပျောက်မယ် ပြောပါတယ်။ အခု အကျိတ်က တဖြည်းဖြည်းမာလာပြီး ဖိထိုင်မိရင်တောင် နာလာပါတယ်ဆရာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁လကမှ ဦးလေးတယောက်လဲ ကျွန်တော့်လိုမျိုး အဆီကျိတ်ကို ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ် ကြက်ဥ အလုံးသေးလောက် အရွယ်စားရှိတဲ့အလုံးထွက်လာပါတယ်ဆရာ။ သူက အခုတော့ အနာတောင်ကျက်နေပါပြီ ။ ကျွန်တော်က ကျောင်းသားမို့လို့ ခွဲသင့် မခွဲသင့် စဉ်းစားနေတာပါဆရာ။ ဆက်ပြီး အကျိတ်က ကြီးလာနိုင်သေးလား၊ မခွဲပဲ ပျောက်တဲ့နည်းလမ်း ရှိမလား၊ ဘာကြောင့် အဆီကျိတ်ဖြစ်တာလဲ ဆိုတာတွေကို ကျေးဇူး ပြုပြီး ပြောပြပေးပါဆရာ။
၂။ ဆရာ ကျွန်တော့်အသက် ၂၆ နှစ်၊ လူပျို၊ မြန်မာနိုင်ငံကပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်ကစပြီး ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီကျိတ်တွေထွက်လာလို့ပါ။ ဘာကြောင့်ထွက်လာတာလည်းဆိုတာ သ်ိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ပေါင်နဲ့လက်မောင်းမှာ ပိုများပါတယ်။ ခွဲထုတ်ရင်လည်း အမာရွတ်တွေများမှာစိုးလို့ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းများများလုပ်ရင်ရမလား။ ပျောက်တဲ့ဆေး ရှိမလားဆရာ။ တကယ်လို့မရှိရင်လည်း နောက်ထပ်မထွက်အောင့့်။
၃။ သမီးအမျိုးသားရဲ့ ခေါင်းမှာ အဖုကျိတ်တစ်ခု ပေါက်နေပါတယ်။ အဲဒါ ခွဲဖို့ လိုအပ်လားလို့ပါဆရာ။
၄။ ကျွန်တော့်လည်ပင်း အသားပိုတွေ ထွက်လာတာရှိပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ပြောပေးပါ။
၅။ လည်ပင်းမှာဖြစ်သော အကျိတ်တွေက ကင်ဆာကျိတ် ဟုတ်-မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။
၆။ ဖိလိုက်ရင်တော့ နာတဲ့အသားလုံးလို အကျိတ်တွေထွက်တာ စိုးရိမ်ရလားရှင့်။ ကိုယ်အနှံ့မှာ ထွက်တာ ၁ဝ လုံး လောက်ရှိတယ်။ ဘယ်လိုကုသင့်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါရှင့်။
၇။ ကျားပါဆရာ။ အသက်က ၃၁ ပါ။ ၃ - ၄ နှစ်လောက်ကြာပြီလို့ပြောပါတယ်။ နောက်ကျောဘက် ခါးနေရာတွေရယ် လက်တွေ ခြေထောက်တွေမှာ ဖြစ်တာပါ။ အသားလုံးလိုပဲ မမာဘူးလို့ပြောပါတယ် ဓာတ်ပုံက မလွယ်လို့ပါရှင့်။ ဓာတ်ပုံထဲ မပေါ်ပါဘူးဆရာ။ အသားထဲမြုပ်နေတာပါ။ စမ်းကြည့်မှသိရတာပါ။ ဖြစ်ကာစက သတိထားမိတာ ၁ လုံး ၂ လုံးပဲ နောက်မှ ပွါးလာတာပါ။
၈။ ဆရာ အကျိတ်အကြောင်းပြောတော့ လည်ပင်းမှာအကျိတ်လေးထွက်နေတာ လေးလလောက်ရှိပြီမနာဘူးဆရာ။ ဆေးပြကြည့်တော့ တီဘီကျိတ်မဟုတ်ဘူး။ အဆီကျိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ်ဆရာ။ ကင်ဆာကျိတ်ရော။ ဖြစ်နိုင်မလားအသားစ ဓါတ်ခွဲခန်းတင်စစ်ရမယ်ပြောတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး အကျိတ်အကြောင်းရှင်းပြပေးပါလားဆရာ။
Swelling အလုံး၊ Lump အကျိတ်၊ Bump အဖေါင်း၊ Cyst အိတ်ဆိုတာမျိုးတွေကို Tumor လို့ ဆေးစာကခေါ်ပါတယ်။ ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်တာလို့ ၂ မျိုး ခွဲရတယ်။ အများဆုံးက ကင်ဆာမဟုတ်ကြပါ။ ၂ မျိုးလုံးက ဘာလို့ဖြစ်တယ်ကို တိတိကျကျ ပြောမရပါ။ ကျား-မ၊ ကြီးသည်-ငယ်သည်မဟူ အတူတူဖြစ်ကြတယ်။ အစားနဲ့ဆိုတယ်လို့ ထောက်ပြတာ မတွေ့ဘူးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လည်း မပျောက်ပါ။ ဆေးလိမ်းလို့လည်း မပျောက်ပါ။
အလုံးအကျိတ်ဆိုတာ မွေးရာပါ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ၊ ရောင်ရမ်းတာ၊ တခြားဟာ တခုခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ အနာလို၊ ဒဏ်ရာလိုကနေ ဖေါင်းလာတာဆိုရင် ဆရာဝန်မပြောပဲ သိကြပါတယ်။ ရောင်တာအပြင် နာတာ၊ နီတာ၊ ပူတာတွေနဲ့ ရောဖြစ်မယ်။ Fibroids (Myoma) သားအိမ်အလုံး နဲ့ Fibroadenoma ရင်သားအကျိတ်တွေကလဲ အမျိုးသမီးတွေ အတွင်းထဲမှာ ဖြစ်တာများလှတဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အကျိတ်တွေဖြစ်တယ်။
9. Moles မှဲ့၊
Tumor လို့ ပြောလိုက်ရင် အများစုက ကင်ဆာထင်ကြတယ်။ မဟုတ်ပါ။ Tumor ဆိုတာက အမေရိကန်လို၊ Tumour လို့ စာလုံးပေါင်းတာက အင်္ဂလိပ်နဲ့ ခေတ်ဟောင်းပြင်သစ်ဖြစ်တယ်။ ယေဘုယျဆိုရင် တနေရာမှာ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ဖေါင်းကြွလာတာမျိုးကို ခေါ်တယ်။
ရောဂါနာမယ်တွေမှာ နောက်ဆုံးက -megaly နဲ့ အဆုံးသတ်ရင် ကြီးနေတာကို ပြောတာဖြစ်တယ်။ ဥပမာ Hepatomegaly အသည်းကြီးနေတာ၊ Splenomegaly ဘေလုံးကြီးနေတာ။ -oma နဲ့ အဆုံးသတ်ရင် အလုံးဖြစ်တယ်။ ဥပမာ -carcinoma, -sarcoma ဆိုတာမျိုး။ Hemangioma, Meningocele, Branchial cyst, Dermatoid cyst, Thyroglossal cyst တွေက မွေးကတည်းက ဖြစ်တာမျိုးတွေ။ Hematoma ဒဏ်ရာကြောင့် အထဲမှာ သွေးယိုလို့ ဖေါင်းနေတာ၊ Dislocation အဆစ်လွဲလို့ ရောင်နေတာ။
ကင်ဆာမဟုတ်အကျိတ်တွေက သာမန်ဖြစ်တယ်၊ တိုးတာ-ပြောင်းဖြစ်တာ မရှိပါ၊ အန္တရာယ်မရှိပါ၊ တခြားကိုလဲ မပြန့်ပါ။
တချို့ ကင်ဆာမဟုတ်အကျိတ်တွေက ဒုက္ခပေးနိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ ထုထည်သက်ရောက်မှု ခေါ်တယ်။ အရေးပါတဲ့ နေရာ-အင်္ဂါတွေ အပေါ်-အနီးအနား ဖြစ်နေရင် ဖိအား သက်ရောက်စေတယ်။ ဟော်မုန်းထွက်ရာ (အင်ဒိုခရိုင်း-ဂလင်း) တွေမှာဖြစ်ရင် ဟော်မုန်းတွေ ပိုများစေတယ်။ ဥပမာ လည်ပင်းကြီးအကျိတ်၊ ဦးနှောက် (ပစ်ကျူထရီ) အကျိတ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်တယ်။
ကင်ဆာမဟုတ်တာရဲ့ ထူးခြားချက်က အဖုံးလွှာပါတာ ဖြစ်တယ် မှန်ဘီလူးနဲ့ကြည့်ရင် (ဖိုက်ဘရပ်စ်) အလွှာကို တွေ့ရမယ်။ ဒါရှိလို့ အပြင်ကိုမပြန့်စေပါ။ ဒီအချက်ဟာ ကင်ဆာနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်။ ကင်ဆာမဟုတ်တာထဲမှာ Teratoma (တရက်တိုးမား) ဆိုတာကတော့ နည်းနည်းဆိုးတယ်။ တချို့ဟာတွေက ကင်ဆာကိုပြောင်းသွားတတ်လို့။ အူမကြီးမှာ ဖြစ်တဲ့ Tubular adenoma ဆိုတာမျိုးကလဲ Colon cancer အူမကြီးကင်ဆာကို ပြောင်းသွားတတ်တယ်။ Melanoma မှည့်ကင်ဆာနဲ့ Seminoma (ဆီမီနိုးမား) တွေက နာမယ်အရ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ သဘောဆောင်ပေမဲ့ ကင်ဆာတွေ ဖြစ်တယ်။ အစဉ်အလာ ဆက်ခေါ်နေကြလို့ပါ။
ကင်ဆာမဟုတ်ပေမဲ့ အလုံးကလေး တွေ့ရတာအပြင် တချို့မှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေပါ ရှိနိုင်တယ်။ ဥပမာ -
• သွေး မသိမသာဖြစ်ဖြစ်၊ သိသိသာသာဖြစ်ဖြစ် ယိုမယ်။ ဆက်ပြီး သွေးအားနည်းလာမယ်။
• ဖိနေလို့ အောက်ကအင်္ဂါ နာမယ်။ အလုပ်မလုပ်နိုင်တာ ဖြစ်စေမယ်။
• ဟော်မုန်းများတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာမယ်။
• ပိတ်ဆို့နေမယ်။ ဥပမာ အူပိတ်တာ။
• သွေးကြောကိုဖိလို့ သွေးမလျှောက်တာဖြစ်မယ်။ Vital organs အရေးပါတဲ့အင်္ဂါတွေ အဖိခံရမယ်။
အကျိတ်အမျိုးမျိုး (အေ-တူ-ဇက်) -
• Arachnoid cyst ဦးနှောက်အကျိတ်၊
• Baker's cyst ဒူးကောက်ကွေးအကျိတ်၊
• Bartholin's cyst အမျိုးသမီးမွေးလမ်းအဝ အကျိတ်၊
• Breast cyst ရင်သားအကျိတ်၊
• Chalazion cyst (eyelid) မျက်စိအတွင်းစွန်ခြင်း၊
• Choroid plexus cyst (brain) ဦးနှောက်အကျိတ်၊
• Epididymal cyst ယောက်ျားအစေ့ အကျိတ်၊
• Glial cyst ဦးနှောက်အကျိတ်တမျိုး၊
• Gartner's duct cyst အမျိုးသမီးမွေးလမ်းအဝအကျိတ်၊
• Hydatid cyst တိပ်ပြားပုံသန်ကောင်အကျိတ်၊
• Liver cystic disease အသည်းအကျိတ်၊
• Meibomian cyst မျက်ခွံအကျိတ်၊
• Nabothian cyst သားအ်ိမ်အဝအကျိတ်၊
• Ovarian cyst မျိုးဥအိမ်အကျိတ်၊
• Paratubal cyst သားအိမ်ပြွန်အကျိတ်၊
• Pericardial cyst နှလုံးအိတ်အကျိတ်၊
• Peritoneal cyst ဗိုက်ခေါင်းအဖုံးလွှာအကျိတ်၊
• Pilar cyst ဦးရေခွံအကျိတ်၊
• Renal cyst ကျောက်ကပ်အကျိတ်၊
• Polycystic ovary syndrome မျိုးဥအိမ်အကျိတ်၊
• Pineal gland cyst ဦးနှောက်အကျိတ်၊
• Sebaceous cyst ချွေးထွက်အိတ်အကျိတ်၊
• Spermatocele ယောက်ျားအကြောအကျိတ်၊
အတွင်းထဲရော အပြင်မှာပါဖြစ်တဲ့ အလုံး-အကျိတ်တွေထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းတာတခုက Dermoid cyst (Cystic teratoma) ဆိုတာပါ။ သူဖြစ်ရင် လူတွေမှာရှိတဲ့ (တစ်ရှူး) မှန်သမျှ သူ့မှာရှိနိုင်လို့၊ အမွှေး၊ ဆံပင်၊ ချွေး၊ အဆီ၊ အရိုး၊ လက်သည်း၊ သွား၊ အရိုးနု၊ လည်ပင်းကြီးတစ်ရှူး၊ စတာတွေထဲက တွေ့ချင်တာ တွေ့နိုင်တယ်။ ကင်ဆာမဟုတ်ပါ။ မျက်ခုံးဘေးမှာ လာတွေတဲ့ အလုံးဆိုရင် ဒါဖြစ်မလား သံသယမျက်စိနဲ့ ကြည့်ရတယ်။ အပြင်ကစမ်းရင် ရာဘာကို စမ်းရသလိုနေမယ်။ မခွဲခင် သွားကလိရင် ရောင်နိုင်တယ်၊ ရင်းနိုင်တယ်။ အကုန်အစင် ခွဲမထုတ်ရင် ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်အဖြစ်များ နေရာတွေကတော့ မီးညှောင့်ရိုးအပေါ်နဲ့ မျိုးဥအိမ်မှာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မျိုးဥအိမ်မှာ ဖြစ်ရင် ဆံပင်တွေ အထွေးလိုက်ပါနိုင်တယ်။ အပင်းမဟုတ်ပါ။
ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့အကျိတ်ကို ဆေးကုဘို့ မလိုဘူးပြောရင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူရှိနေလို့ တခုခုခံစားရမှ ကုဘို့လိုတယ်။ ဥပမာ လှချင်လို့။ ကြောက်လို့။ ကင်ဆာပြောင်းလာမှာစိုးရိမ်လို့။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ လကျော်လောက်က ကျွန်တော်တို့ဌာနကို ကင်ဆာဝေဒနာရှင် ဆရာတော်တစ်ပါး ရောက်လာ တယ်။ ဆရာတော်က ကင်ဆာရနေလို့ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများရဲ့ ညွှန်ကြားချက်လည်းပါလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဆရာတော်ကို ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဖို့စီစဉ်တော့ ဆရာတော်က လက်မခံဘူး။ ပြန်ကြွသွားတယ်။ အဲ့ဒီလိုနေလာရာက ၃-လကျော်လောက် အကြာမှာ အဲဒီဆရာတော် ပြန်ကြွလာတယ်။ ကျွန်တော်သူရောဂါကို စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ ကင်ဆာရော ဂါ ပျောက်ကင်းနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်းအံ့သြမဆုးံဖြစ်သွားတယ်။
ဒါနဲ့ ‘ဆရာတော်ဒီကြားထဲ ဘာဆေးတွေ သောက်လဲလို့ မေးကြည့်တယ်။ ဆရာတော်က သင်္ဘော ရွက်အစိမ်းတွေကိုပဲ အရည်ညှစ်သောက်တယ်’ လို့ပြောပြတယ်။
သည့်နောက် ဆရာတော်လည်း ၀မ်းသာအားရ ပြန်ကြွသွားတာပဲ။ ဆရာတော်ရဲ့ ကင်ဆာရောဂါဟာ သင်္ဘောရွက် အစိမ်းကြောင့် ပျောက်တယ်ထင်တာပဲ၊ အတိအကျတော့ မပြောနိုင်ဘူး။ ဆေးသိပ္ပံသဘောအရ တစ်ဦး တစ်ယောက် သင်္ဘောရွက်ကြောင့် ကင်ဆာပျောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ အားလုံးပျောက်လိမ့်မယ်လို့ ကောက် ချက်ချ မပြောနိုင်ဘူးဆရာ။ ကင်ဆာအမျိုးအစားနဲ့ ကင်ဆာလူနာပေါင်းများစွာကို စမ်းသပ် ကြည့်ပြီး ပျောက်မှ အတည်ပြုပြောနိုင်မှာပါ။ ထူးခြားတာကတော့ အမှန်ပဲဆရာ” ဟူ၍ ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာ တင်အောင်က ပြောပြခဲ့သည်။ ကျွန်တော်လည်း ထိုစဉ်ကပင် သင်္ဘောရွက် စိမ်းအာနိသင်ကို သတိပြုမိသည်။ ၁၅-နှစ်ခန့်ကြာသောအခါ ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာတင်အောင်သည် ကွယ်လွန် သွားရှာသည်။
ကျွှန်တော်လည်းကင်ဆာရောဂါနှင့် သင်္ဘောရွက်အကြောင်း သူ၏ပြောပြချက် ကို မေ့မေ့ပျောက် ပျောက် ပင်ရှိခဲ့သည်။ ဤသို့ရှိရာမှ မကြာမီက ရန်ကုန်မြို့မဟာသိမ်တော်ကြီး ဆရာတော်ကြီး အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တကုမာရက လက်ကမ်းစာစောင် ကလေးတစ်စောင်ကို မြတ်မင်္ဂလာတွင် လိုသလို အသုးံပြုနိုင်ရန် တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ဦးဥာဏ်လင်းအောင်မှတဆင့် ကျွန်တော့်ကို ပေးလိုက်သည်။ ဤလက်ကမ်း စာစောင်တွင် “ကင်ဆာရောဂါပျောက်စေသောသင်္ဘောရွက်” ဟူသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ပါလာ သည်။ ရေးသားတင်ပြသူမှာ ဒေါက်တာခင်ရွှေ ( တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်) ဟူ၍ ဖော်ပြထားသည်။
ကျွှန်တော်ဖတ်ရူလေ့လာကြည့်ရာ ကင်ဆာရောဂါ ပျောက်စေသော သင်္ဘောရွက်အကြောင်း စုံစုံ လင်လင် ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဤတွင်ကွယ်လွန်သူဆရာဝန်ကြီင်္း ဒေါက်တာ တင်အောင်၏ ကင်ဆာရောဂါနှင့် သင်္ဘောရွက်အကြောင်းပြောကြားချက်ကို သတိရကာ အများပြည် သူတို့ ဖတ်ရူနိုင်ရန် ထပ်ဆင့်တင်ပြပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ပါ။ ဆေးဆရာ လည်းမဟုတ်ပါ။ ဆေးမြီးတို အကြောင်းရေးသားသူလည်း မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် ဤဖြစ်ရပ်၊ ဤ ဆောင်းပါးတို့သည် ကင်ဆာ ရော ဂါဝေဒနာရှင်တို့အတွက် တစ်စုံတစ်ခုသော အတိုင်းအတာအထိ အကျိုးပြုနိုင် လိမ့်မည်ဟုထင်မြင်ကာ မူရင်းအတိုင်း ကုသိုလ်ပြု တင်ပြအပ်ပါသည်။
ဒေါက်တာခင်ရွှေ (တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်) ဘာသာပြန်တင်ပြသော ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ “သင်္ဘောပင်ကို အပူပိုင်း အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် စ-တင်စိုက်ပျိုးနေကြ သည်။ လက်တင်ဘာသာအားဖြင့် ( Carica Papaya ) ဟုခေါ်ပြီး သြစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန် တွင် ပေါပေါဟု ခေါ်ဆိုသည်။ မြောက်အမေရိကရှိ လက်တင်ဘာသာအားဖြင့် ( Asi-mina Tirbola ) နှင့်ရှိသော အပင်နှင့်မတူချေ။ ၎င်းကိုလည်း ပေါပေါဟုခေါ်ဆိုသည်။ နှစ်ပင်စလုံး ဆေးဖက်ဝင်ပါသည်။ သင်္ဘောရွက်အရည်သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ရွှေကမ်းခြေရှိလူများအား ကင်ဆာရောဂါပျောက်စေပါသည်။
စာရေးဆရာ ( Harold Tieze )က ၎င်းစာအုပ်တွင် မည်သို့မည်ပုံ အဆီထုတ်မည်နှင့် ကင်ဆာပျောက် ကင်းသူတို့၏ ဇာတ်လမ်းတို့ကို အတိအကျ ရေးသားထားသည်။ ဤစာအုပ်တွင် ရွှေကမ်းခြေလက် ကမ်းစာစောင်တွင်ပါရှိသော အောက်ပါ အစီရင်ခံစာကိုဖော်ပြပါမည်။ “ပေါပေါသည် ကင်ဆာပျောက် သစ်သီးဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်မူးတို့သည် ကင်ဆာရောဂါရှင်တို့၏ သင်္ဘောရွက်အလှူခံမူကို အားပေး ကြသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၄- နှစ်က ဤအရပ်နေသူသည် ကင်ဆာရောဂါပျောက်ကြောင်း အရွက်၏ ဂုဏ်သတ္တိကိုထုတ်ဖော်ပါသည်။ ၎င်းကိစ္စကိုခြေရာခံလိုက်ရာ သူနာပြုဆောင် ရောက်သွားပါသည်။ မစ္စတာစတန်ရှယ်တန်သည် ပြုတ်ထားသော သင်္ဘောရွက်သတ္တုရည်ကို သောက်ခြင်းဖြင့် ပိန်းကြာ ရွက်ပေါ် ရေမတင်သကဲ့သို့ ကင်ဆာရောဂါ ရှောရှောရှူရှူ ပျောက်သွားသည်။
အမေရိကန်၌ သုသေသနလုပ်ရာတွင် သိပ္ပံဆိုင်ရာ အထောက်အထား ရရှိပါသည်။ ၎င်းသုသေသန၌ သင်္ဘောပင်မှ ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုကို ထုတ်နုတ်ရာ ကင်ဆာရောဂါ အဆတစ်သောင်းခန့် ထက်မြက် သွားပါသည်။ မစ္စတာရှယ်တန်က ဤတွေ့ရှိမူသည် ကျွန်ုပ်ကို သောက်သုံးရန် အကြံပေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ှပ် နှစ်လ စမ်းသောက်ကြည့်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် တီဘီရောဂါကို ဓါတ်မှန်ဖြင့်အဆုတ် စစ်ဆေးခဲ့ သည်။ ဆရာဝန်တို့က ကင်ဆာပျောက်ပြီဟု ပြောပါသည်။ ထိုနှင့် ကျွန်ုပ်က အထူးကုတို့အား ပြော ကြားရာ ၎င်းတို့က မယုံကြည်ကြချေ။ နောက်ဆုးံ ခေါင်းကုတ်ပြီး ကျွန်ှပ်က ကင်ဆာရောဂါအတွက် သင်္ဘော ရွက်ကို ပြုတ်သောက်ခဲ့ကြောင်း ထောက်ခံချက်ရေးခဲ့သည်။ ၁၉၆၂-ခုနှစ် ကင်ဆာသည် ဘယ်တော့ မှ ပြန်လည်မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါ။ ရှယ်တန်၏ဇနီး သည်ကင်ဆာပျောက်ကြောင်း ဆေးမြီးတိုတို့ကို အခြားဝေဒနာ သည်တို့အားဖြန့်ဝေပေးရာ ၁၆-ယောက် ပျောက်ကင်းချမ်းသာပါသည်။
သင်္ဘောရွက်နှင့်ရိုးတံတို့ကိုမသောက်ခင် နှစ်နှစ်ရီကြာဒယ်အိုးထဲတွင် ပြုတ်ထားရပါသည်။သို့သော် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ထားပါက ၃၊၄ရက် ခံပါသည်။ ထို့နောက် ပုပ်သွားမည်။ နောက်လူတစ်ယောက်က ၁၉၇၈-ခု စာစောင်ပါအတိုင်း ဖတ်ပြီး သင်္ဘောရွက်တို့ကိုဆေးလုပ်ကာ ကင်ဆာရောဂါသည်တို့အား ပေးခဲ့ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယခင် ကင်ဆာရောဂါတွေ့ရှိမူကြောင့် သေမည့်လူတို့သည် ယခုအခါ အသက်ရှင်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် သင်္ဘောရွက်ကုထုံးသည် ကင်ဆာကို တကယ်ပျောက် ကင်းပါသည်။ (ဆေးမြီးတို) သင်္ဘောရွက်အလတ်စားတို့ကို ဆေးကြောပြီး ဂေါ်ဖီကဲ့သို့ တောက် တောက်စဉ်းကာ ဒယ်အိုးထဲတွင်ရေနှစ်လီတာဖြင့် ပြုတ်ပါ။ အဖုံး ဖွင့်ပါ။ ၄-ခွက် ၂-ခွက်တင် ပြုတ်ပါ။ ထို့နောက်စစ်ပြီး ဖန်ပုလင်းထဲတွင်ထည့်ထားပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်ထည့်လျှင် ၃-၄-ရက် ခံမည်။ အကယ်၍ နောက် ကျသွားပါက စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။ စားပွဲဇွန်းသုံးဇွန်း(သို့) ၅၀ မီလီမီတာကို ၁ရက် သုးံကြိမ်တိုက်ပါ။ ဤသင်္ဘောရွက် ကုထုံးဇာတ်လမ်းသည် အခြားဆေးဖက်ဝင်ကုထုံးများထက် ပိုမို ဆန်းပြားသည်။
R.J.W မှ အောက်ပါအတိုင်း စာတစ်စောင်ရေးသားသည်။ ကင်ဆာရောဂါဖြင့် သေလုဆဲဆဲ ဖြစ်နေသော လူနာများအား သင်္ဘောရွက်ပြုတ်ရည်နှင့် ကုရပါသည်။ ရှေးဦးစွာ အသက် ၄၀-ရှိ ငှက်ပျောတောင် သူတစ်ယောက်တွင် ဆီးအိမ်ကင်ဆာရောဂါ ပြန့်ပွားမူကို မရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ချေ။ ကျွန်ုပ်က တောစာ များ၊လတ်ဆတ်သောဂျုံဖြူများ၊ သကြားများ၊ ထိန်းဆေးမပါသော အစားအစာများစားရန် ပြောကြားပြီး သင်္ဘောရွက်တစ်ဆုပ်ကျ ဒယ်အိုးထဲတွင်ထည့်ပြုတ်ကာ သောက်စေသည်။ ထိုတောင် သူသည် ၅-ပါတ် သောက်လိုက်ရာ ကင်ဆာရောဂါ ပျောက်ကင်းသွားသည်။ အရွက်တို့ကို အခြောက် လှန်း၊ အမှုန့် ထောင်းပါကပိုမိုစွမ်းပါသည်။ ကြွက်များတွင် စမ်းသပ်ကြည့်ရာ အောင်မြင်ပါသည်။ သင်္ဘောရွက်များကို ထုထောင်း၍ ကြွက်များကိုဆေးထိုးကြည့်ရာ ကြွက်ရှိကင်ဆာအကျိတ်များ ပျောက် ကုန်ပါသည်။ သင်္ဘောရိုးတံတွင် Acetogenin ဓာတုပစ္စည်း ပါဝင်ရာ ၎င်းသည် ဆဲလ်အတွင်းရှိ ATP ထုတ်လုပ်မူ များကိုမျှတစေပါသည်။
ဤသို့အားဖြင့် ကင်ဆာဆဲလ်များဖြင့် သွေးကြောများရှင်သန်မှုတို့ကို Acetogenin ဖျက်ဆီး ပစ်ပါ သည်။ သင်္ဘောရွက်သတ္တုရည်တွင် Acetogenin အပါအ၀င် ဓာတုပစ္စည်း ၁၀၀ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်များကို ဓာတ်ကျဆင်းမှုတွင် ပံ့ပိုးကူညီပါသည်။ ၁၉၇၆-ခု၊ ဒေါက်တာ မက်လလင်း၊ ပါကျူးတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခသည် အမျိုးသားကင်ဆာသိပ္ပံမှ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကြောင့် ထိုဆေးပင်၏ ကင်ဆာထိရောက်မှုကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အပင် ၃၅၀၀-တွင် အစွမ်းထက်ပစ္စည်း ၅၀-တွေ့ပါသည်။ ၎င်းအနက် Acetogenin သည် အလွန်အစွမ်းထက်ပြီးသန်ကောင်များ ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ မှိုများနှင့် ကင်ဆာဆဲလ်တို့ကို တိုက်ဖျက်ပါသည်။ ထို့ပြင် လူနာအား ဆေးကြောင့် ဒုက္ခမဖြစ်စေပါ။
အထူးသဖြင့် သင်္ဘောရွက်သည် ကင်ဆာကျိတ်တို့ကို ထူးကဲစွာ ချေဖျက်ပေးပါသည်။ ထို့ပြင် ဓာတု နှင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးတို့တွင် ပံ့ပိုးမှုအဖြစ် သင်္ဘောရွက်ကိုသုံးကြပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိပါ။ ထို့အတွက်ကြောင့် သင်္ဘောရွက်သည် မြစ်ချင်းပြီးဆေးတစ်လက်ဖြစ်ရာ ၎င်းနှင့်အလား တူဆေးအမည်မှာ ရဲယိုရွက်၊ ရဲယိုသီး၊ ခုခံအားကျဆင်းမှု ကယ်တင်ရှင်တို့ဖြစ်ကြပြီး အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း ကင်ဆာတို့ကို တိုက်ဖျက်သည်။ သို့သော်လည်း သင်္ဘောရွက်ဆေးကို KC-H (သို့) COQ10 COENZYNE 10 ကဲ့သို့သော် လည်ပင်းကျိတ်ဆွဆေးပြားဖြင့် ပူးတွဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ Laetrine ဆေးကိုမှီဝဲသော ကင်ဆာရောဂါရှင်တို့သည် သင်္ဘောရွက်နှင့်နာနတ်သီးကို စားပေးရပါမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အယ်ဇိုင်းဓာတ်တို့သည် ကင်ဆာဆဲလ်တို့ကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ထို့ကြောင့် အစေ့အတွင်းရှိ B-17 သည် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
တုပ်ကွေးရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားတစ်ဦးမှ သိရှိရသည်မှာ ၎င်း၏သွေးသွင်းမူသည် ၁၅-လီတာရှိပြီး အင်အားချည့်နဲ့နေပါသည်။ ဖခင်ဖြစ်သူသည် စိတ်ပူပြီးဆေးမြီးတိုကို လိုက်ရှာရာ သင်္ဘော ရွက်အရည်ကိုသာလျှင် မှီဝဲကြောင်း၊ ၎င်းသွေးသွင်းမူကို ၂၀ လီတာတွင် သွေးဥငယ်အရေတွက် ၄၅.၅ ရှိကြောင်း၊ သို့သော် သင်္ဘောရွက်ဆေးကို မှီဝဲပြီးနောက် သွေးအဆင့် ၁၃၅-အထိ မြင့်တက်သွား ကြောင်း ၊ ဆရာဝန်တို့တောင်မှ အံ့အားသင့်ပြီး ကလေးကို ဆေးရုံမှဆင်းစေသည်။ ထိုသတင်းသည် တစ်မြို့လုံး ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ဆေးမြီးတိုအရ သင်္ဘောရွက်နှစ်ရွက်ကို ဆေးကြောထုထောင်း စစ်ချရမည်။ ထိုအခါ အရွက်တစ်ရွက်လျှင် စားပွဲဇွန်း ၁-ရမည်။ တစ်နေ့လျှင် ၂-ဇွန်းမှီဝဲပါ။ ပြုတ်ခြင်း၊ အပူပေးခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဆေးအာနိသင်ပြယ်တတ်သည်။ အရွက်ဖွားဖွားကိုရွေးပါ။ အလွန်ခါးသဖြင့် နှာခေါင်းပိတ်ပြီး မျိုရမည်။
နောက် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာ အသက် ၃၂-နှစ်ရှိသော ကျွှန်တော့်သူငယ်ချင်းတွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်က တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီး ဆေးရုံတင်ရသည်။ ဆရာဝန်ကတုပ်ကွေး ပျောက်ခြင်း မရှိကြောင်းပြောပြပါသည်။ မိမိခုခံအားကိုသာ မြင့်ပေးရန်ပြောသည်။ ထိုလူနာတွင် သွေးနှစ်ခါသွင်းပြီး ဘုရားဆီတွင် ဆုတောင်း နေရ သည်။ ၎င်း၏ သွေးဥတို့သည် ၂၈၀၀၁ သို့ ၃-ရက်အတွင်းကျသွားသည်။ ထိုအခါ ယောက္ခမ ဖြစ်သူက သင်္ဘောရွက်ရည်တိုက်ပြီး ကုသရာ သွေးများပြန်လည်မြင့်တက်ပြီး ၃-ရက်အတွင်း ပိန်းကြာရွက် တွင် ရေမတင်သကဲ့သို့ ရောဂါပျောက်ကင်းခြင်းသို့ ရောက်၏။ ထူးခြားသည်မှာ သင်္ဘော ရွက်သည် တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်သူအား အပူငြိမ်းစေကာ အေးမြမှုကိုပေးပါသည်။ လည်ချောင်း ရောဂါဖြစ်ပါက သင်္ဘောရွက်ကို မှီဝဲသင့်သည်။ ထို့်ကြောင့် အိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ သင်္ဘော ရွက်ကို မွှေစက်ထဲ သို့ထည့်ပြီး ညှစ်၍ သုံးဆောင်ကြပါလေ။
ရိုးရိုးသာမန် ချောင်းခြောက်ဆိုးတာလောက်သာဆိုရင် ဒီရိုးရာ သဘာဝ ဆေးနည်းက အကူအညီဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအထဲ ပင်စိမ်းလည်း တစ်ခုအပါဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
ပင်စိမ်းကို အအေးမိ ဖျားနာခြင်းနဲ့ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း ဖြစ်တဲ့အခါ သွားဖုံးယောင်ကိုင်းခြင်းနဲ့ သွားပိုးပေါက်ခုခံကာကွယ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင်တွေထဲ အကောင်းဆုံးလို့ မှတ်ယူခံထားရပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် နေ့တိုင်း ပင်စိမ်းပင်ရွက်နည်းငယ်စားပေးပါ။
ဒါမှမဟုတ် ပင်စိမ်းရွက်ရည်ကျို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပင်စိမ်းရွက် အခြောက်ကို ပွတ်ပွတ်ဆူနေတဲ့ရေထဲ ၁၀ မိနစ်ခန့် ထည့်စိမ်ပြီး ရလာတဲ့ အရည်ကို သောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအရည်ကို ရက်သတ္တပတ်လုံး ပုံမှန်သောက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်း ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူစိတ် အနည်းငယ်ကို ကြိတ်ချေ၊ အရည်ကို ညှစ်ယူပြီး အဲဒီအရည်ကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ညှစ်ယူထားတဲ့ သံပုယိုရည်ထဲ ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီအရည်ကို အာနိသင်လျော့အောင် ရေရောပေးရမှာပါ။ အဲဒီရလာတဲ့အရည်ကို တစ်နေ့ (၂) ကြိမ်သောက်ပေးပါ။
နောက်ဆုံး သုတေသနပြုချက်များမှာလည်း မက်မွန်သီးမှာ ကိုယ်ခံအားစနစ် တိုးမြင့်စေတဲ့ အရာတွေပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မက်မွန်သီး (၉) လုံးကြိတ်ထားသောအမှုန့်၊ ပျားရည် (၁) ဇွန်းနဲ့ ထောပတ်အနည်းငယ် ရောစပ်ပြီး ထမင်းစားဇွန်း (၁) နဲ့ တစ်နေ့ ၂ – ၃ ကြိမ်သောက် ပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။